IINGCAMANGO ZETILE ZEGUMBI LOKUHLAMBELA (IMIFANEKISO YOYILO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iingcamango zeTile zeGumbi lokuhlambela (Imifanekiso yoyilo)
Wamkelekile kwigalari yethu yemibono entle yethayile yangasese. Jonga iintlobo ngeentlobo zeendawo zokuhlambela phantsi komhlaba kubandakanya i-ceramic, i-porcelain, i-slate, i-granite, i-vinyl, i-linoleum kunye nemarble.
Ngokwembali, iithayile zazisetyenziswa njengokugqibezela kokuhombisa izakhiwo zoluntu ezibalulekileyo kunye nendlu yesidima kunye nesityebi. Imvelaphi yayo isusela kumaxesha amandulo, yayizinto zodongwe ezisetyenzisiweyo njengezona zinto ziphambili kwimveliso. Kuyo yonke le minyaka, ubugcisa bokwenza iithayile buguquke baba bubugcisa obugqwesileyo obenziwe ngobugcisa obenziwe ngesandla kunye nepeyinti yokuhombisa.
Ukwanda kwebango kunye nokuthandwa kwezinto kukhokelele kwimveliso yobuninzi nakwimizi-mveliso. Kwakuyiminyaka yoo-1950 xa iithayile zafikelela kwincopho yazo njengezinto zokugqibezela imigangatho yokuhlambela kunye neendonga. Uninzi lwamakhaya eMelika apho ehonjiswe ngeethayile zeceramic ezenziwe ngeglasi kwiindawo ezahlukeneyo zendlu. Ukusebenziseka, ukusebenza kunye nobuhle beethayile kukhokelele ekubeni yeyona ndawo yokuhlambela ithandwa kakhulu ukugqiba izinto ukuza kuthi ga ngoku.
Sijoyine njengoko sivavanya iithayile zangasese ezahlukeneyo ukukunceda uthathe isigqibo sokuba yeyiphi eyona ilungele ikhaya lakho okanye elandelayo remodel yokuhlambela iprojekthi.
Iindidi zeTiles zeGumbi lokuhlambela
Eyona tile ilungileyo yeGumbi lokuhlambela elikwiPorcelain okanye iCeramic?
Umgangatho weVinyl kunye neethayile
Umgangatho wePlastiki wokuLaminetha
Iithayile zomgangatho weLinoleum
Umgangatho wethayile yeCork
Iithayile zeGumbi lokuhlambela laseTerra Cotta
Umgangatho wamatye okuhlamba amatye endalo
Umgangatho weMarble Igumbi lokuhlambela
Iithayile zoMgangatho weLimestone
Isilayidi igumbi lokuhlambela
Igranite Igumbi lokuhlambela
Umgangatho weGumbi lokuhlambela laseKhonkrithi
Eyona tile ilungileyo kuMgangatho wegumbi lokuhlambela
Uninzi lwethu luqhelene neethayile zeceramic xa kufikwa kumba wokuhlambela ongakhetha kuwo. Nangona kunjalo, zininzi izinto ezinokuphononongwa kolu hlobo lwesicelo. Ngamnye unikezela ngenkangeleko eyahlukileyo kunye nomlinganiswa kwiindawo zokuhlambela, ngelixa esenza imisebenzi eyahlukeneyo kunye nezibonelelo.
Izinto eziqhelekileyo zokuthambisa iithayile zangaphantsi ziithayile zekheram, iithayile zephercelain, iithayile zeterracotta, iithayile zesamente kunye nelitye lendalo elinje ngesileyiti, itrvertine, imabhile kunye negranite. Ngaphandle kwezi zinto, kusekho ezinye izinto zokwakha ezinokukunceda wakhe uyilo olumangalisayo lokuhlambela ngaphandle kokuphazamisa umgangatho kunye nokusebenza.
Nazi ezinye iintlobo zezinto zokuthambisa zangaphantsi ezinokusetyenziselwa iithayile:
Iinkuni ezintle ezifana neetereyile zigxininisa iindonga kunye nomgangatho wale ndawo yokuhlambela yanamhlanje. Imibala ekhanyayo yomthi efana neetiles zeceramic kunye nezinto ezimhlophe zokuhlambela zibonakala ziqaqambile njengoko ukukhanya kwendalo kudlula kumgangatho ukuya kwindonga yeglasi. Ukulula kwezinto ezigqityiweyo kuthelekiswa nokusetyenziswa kweethayile zemibala yeglasi eluhlaza okwesibhakabhaka yommandla weshawari. Iithayile zemibala yeglasi nazo zijongeka zintle ngakumbi phantsi kwezibane zendalo njengoko zinika umphumo omenyezelayo kunye nobukhazikhazi. Ngelixa umbala wayo ohlaza okwesibhakabhaka unegalelo kwindawo epholileyo, ethomalisayo kule ndawo yokuhlambela.
Iithayile zeCeramic lukhetho oluthandwayo lokugqiba izindlu zangasese ngenxa yokwahluka kunye nokuqina.
Ukwenziwa kwezinto ezibonakalayo ngokubanzi kwenziwa kwiimveliso zendalo ezinjengesanti kunye nodongwe olumhlophe okanye obomvu olubunjiweyo lube yimilo kwaye lubhakwe eziko. Zingagqitywa nge-glazing ezibanika indawo ekhanyayo, okanye zinokushiywa zingakhanyiswanga.
Zininzi izibonelelo zokusebenzisa iithayile zeceramic kwindawo yokuhlambela. Ngaphandle kokungabizi mali ininzi, iithayile zeceramic zinokwenziwa ngokwezifiso kakhulu. Le nto kulula ukuyiphatha kwaye inokunqunyulwa ngeendlela ezahlukeneyo ukuze ilingane kwiindawo ezahlukeneyo kunye neendawo zoyilo lokuhlambela. Iileyili zeCeramic zilula ukusika xa kuthelekiswa ne-porcelain tile kwaye zifuna kuphela i-saw wet tile okanye i-snap tile cutter. Ngaphantsi iithayile ze-porcelain kwaye zinokusikwa ngaphandle koncedo lweetterter ezinamava.
Ikwayinto eguqukayo kwaye inokusetyenziswa kwiindidi ezininzi zezicelo, nokuba kungangumgangatho wophahla, njengesigqubuthelo sodonga, kwiziporo zosihlalo, iincanda zodonga, iindonga zokugxininisa okanye ukuphefumla kunye nokudibanisa. Ukongeza koku, iithayile zeceramic ziyafumaneka kwimarike kwaye zinokuthengwa kubathengisi beetayile kunye nakwiivenkile zokuphucula ikhaya.
Xa kuziwa kuyilo, iithayile zeceramic ngokuqinisekileyo zinokuhambisa. Inani lokhetho alibonisayo xa lisiza kuyilo, iipateni kunye nombala azipheli. Ukongeza kuloo nto, kwanobungakanani bayo buyehluka kakhulu nakubo. Ngaphandle kokwahluka ngombala kunye noyilo, uninzi lweethayile zekherale luza nobume obukhethekileyo njengamaza, umda othomalalisiweyo, uyilo oluyi-3d. Lo ngumda ukuba ufuna ukongeza ubunzulu kunye nobukhulu kwigumbi lakho lokuhlambela. Iithayile zekheram ezimiselweyo zinokusetyenziselwa ukugxininisa kwiindonga, zisenza ukuba ujonge kwigumbi lokuhlambela ngakumbi.
Ukufakelwa ngobulumko, iithayile zeceramic azidingi xesha lininzi kunye nomzamo wokufaka. Ngezixhobo ezimbalwa kunye nesiseko sokwazi ukuba njani, ukuseta iithayile kunokwenziwa njengokwenza ngokwakho iprojekthi. Imikhombandlela yokufakwa kweethayile zeceramic zilungile ngokuthe ngqo- zibekwe kwipateni oyifunayo kunye nokushiya izithuba usebenzisa i-adhesive adhesive kwaye ugcwalise izikhewu phakathi kwe-grout. Nangona kunjalo, ukuba uyathandabuza ngendlela enokuvela ngayo iprojekthi yakho, unokuhlala uqesha ingcali ukuba ikwenzele umsebenzi. Iindleko zabasebenzi kufakelo lweethayile zifikeleleka ngokufanelekileyo kwaye ngofakelo lobungcali, ufumana isiqinisekiso ngomgangatho womsebenzi kwaye wandise ixesha lokuhlala kwezinto. Uncedo lobuchwephesha luyafuneka ngakumbi ukuba iithayile zakho zeceramic zikhulu kuba zinokuba nzima kwaye ke oko kwenza ukuba kubenzima ukufakela.
Iithayile zeCeramic nazo zilondolozo oluphantsi. Inokukhuhlulwa ngokulula kusetyenziswa ibrashi kunye nezinye iisepha zekhaya okanye izinto zokucoca. Nangona kunjalo, iithayile ze-ceramic ezenziwe ngombala zinzima ngakumbi ukuzicoca kuba zihlala zithatha ubumdaka ngokuthelekiswa nomphezulu ocabaleleyo nogudileyo. Imisonto kunye negrout esetyenziselwa ukugcwalisa izikhewu phakathi kweethayile yenye yeengcambu zeengxaki zokucoca. Ukungcola, ukungcola kunye nokungcola kunokungena ngokulula phakathi kwe-grout kwaye kuya kufuna ukukhuhla okungaphezulu.
Nangona kunjalo, kusekho iingxaki ezimbalwa ekusebenziseni iithayile zeceramic. Iithayile zeCeramic azinakho ukuzinza xa kuthelekiswa neethayile ze-porcelain. Banokuchaphazeleka ngakumbi kumonakalo wamanzi ngenxa yecala labo. Ngexesha lobusika, iithayile zomgangatho weceramic zinokubanda kakhulu kwaye uninzi lwabanini bamakhaya bakhetha ukutyibilika okufudumeleyo ngakumbi xa kufikwa kumagumbi okuhlambela.
Iindleko: Iithayile zeCeramic zibiza kakhulu, ziqhuba umndilili weedola ezi-7 ukuya kwezi-9 ngeenyawo zenyawo nganye. Iithayile zexabiso eliphantsi zeceramic zinokuhamba zide ziye kuthi ga kwi-2 yeedola kwisikwere ngelixa ezo ziwela kwinqanaba eliphezulu zinokuthatha ukuya kuthi ga kwi-20 ukuya kwi-40 yeedola ngeenyawo zenyawo.
Iithayile eziphezulu ze-porcelain ezimhlophe ezikhethiweyo ezikhethiweyo azikhethi kuphela kwiindawo zokuhlambela kodwa nakwezona ndawo zangaphakathi zokuhlala ngenxa yesibheno esingenasiphelo. I-aesthetics elula kodwa eyothusayo yeethayile ezimhlophe ze-porcelain ikhanyisa le ndawo yokuhlambela yakudala kwaye kwangaxeshanye, iyenza ibonakale iphangalele, inomoya kwaye icocekile. Ubume obumenyezelayo nobumenyezelayo bomgangatho buzaliswa ziingceba zefanitshala ezineenkcukacha ezintle, ngelixa iindonga zigxininiswa yimifanekiso yamaphephadonga eeperile.
Iithayile ze-Porcelain ziluhlobo lweetiles zeceramic kwaye xa kuziwa kulwakhiwo lwezixhobo, ziyafana ngokufanayo. Iithayile zeporcelain nazo zenziwe kwiimveliso zendalo ezinje ngodongwe olubunjwe lwaba yimilo kwaye lwadutyulwa eziko. Nangona kunjalo, umahluko ophambili phakathi kweethayile ze-porcelain kunye neetiles zeceramic kukuba udongwe olusetyenziselwa iithayile ze-porcelain zicocekile kwaye zicokisiwe. Xa kuthelekiswa neethayile zeceramic, iithayile ze-porcelain zibhakwa kubushushu obuphezulu obenza ukuba bube bungqindilili kwaye bube nzima. Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, iithayile ze-porcelain nazo zinombala womzimba, uphawu olwahlula kwiithayile zeceramic Banokugqitywa ngokugaya okubanika umphezulu ocwebezelayo, okanye banokushiywa bengafakwanga.
Iithayile zeporcelain zaziwa ngomgangatho ophezulu wazo. Ukuze i-tile ihlelwe njenge-porcelain, kufuneka yenze inkqubo ethile yokuvavanya. Le nkqubo yovavanyo ilinganisa inani lamanzi elifunxayo. Ke ngoko, ukuba iithayile zihlelwa njenge-porcelain, unokuqiniseka ukuba ukuhlala kwayo kunye nokungabinamanzi emanzini kuxhaswa bubungqina. Iyamelana namabala, ayingenwa ngamanzi, ayonakalisi ngokulula ukusuka ekuchaphazelweni rhoqo kukufuma kwaye ifanelekile ekusebenziseni umsebenzi onzima.
Iithayile zeporcelain ngokwendalo zinamabala amdaka kwaye zinokugxotha naluphi na uhlobo lokungena kolwelo. Iithayile ze-porcelain ezimenyezelelweyo zinzima ngakumbi ukuba zingangcoliswa kwaye azizukujika umbala. Ukuchasana nolwelo lolunye uncedo oluphambili lweetiles ze-porcelain. Kwakhona, oku kunokuqiniswa kunye nokusetyenziswa kweglasi yeglasi eyenza ukuba kuthinteke ngakumbi amanzi. Iithayile zeporcelain nazo ziyakwazi ukumelana nomlilo kwaye zinokuthintela ukusasazeka kwamadangatye xa kuthe kwakho umlilo. Enye into eluncedo kukuba ikwangumbango onganyangekiyo. Ngokungafaniyo nezinye iithayile, i-porcelain ayonakalisi ngokulula.
Ulondolozo olumkileyo, iithayile ze-porcelain zinokucoca ngokulula ngelaphu elimanzi kunye nesisombululo samanzi esincinci.
Xa kuziwa kuyilo, iithayile ze-porcelain zikwabonelela ngokuguquguquka kunye nokusebenza ngokuchaseneyo. Iza ngemibala eyahlukeneyo, iimilo kunye neepateni. Ubungakanani bayo buqala kwiithayile ezincinci ze-mosaic ezi-intshi enye nge-intshi enye ukuya kwii-slabs ezinkulu ezinokufikelela kwi-2 ukuya kwi-4 iinyawo.
Ngokungafaniyo neethayile zeceramic ezinconyelwe ukuba zizenzele iiprojekthi, iithayile ze-porcelain kunokuba nzima ukuziphatha. Ukufakwa kuyasebenza, kuyasokolisa ngokwasemzimbeni kwaye kuthatha ixesha elininzi. Ngenxa yobulukhuni kunye nokuxinana, iithayile ze-porcelain zinzima kakhulu ukusika kwaye ziya kufuna ipeyinti ekhethekileyo yedayimani kunye nesarha emanzi. I-porosity ephantsi nayo ifuna ikhompawundi ekhethekileyo xa isiza kuseto. Ukuze unamathele ngokupheleleyo kumphezulu, kufuneka kusetyenziswe udaka lwethinset olulungisiweyo. Ubunzima beethayile ze-porcelain inokuba ngumcimbi njengoko kunokufuna isandla esongezelelekileyo soncedo. Uncedo lobuchwephesha luyafuneka kodwa qaphela ukuba iyakuba ziindleko ezongeziweyo zabasebenzi
Ixabiso: Iithayile ze-porcelain zibiza kakhulu xa kuthelekiswa neetiles zeceramic Uluhlu lwamaxabiso aphakathi kweethayile ze-porcelain yi- $ 3 ukuya kwi-6 yeedola ngeenyawo zekwere, kuxhomekeke kubukhulu kunye noyilo. Umahluko weendleko zawo umalunga neepesenti ezingama-40 ngaphezulu, kodwa uthathwa njengotyalo-mali olumkileyo njengoko unokuhlala amashumi eminyaka ukuba ifakwe kakuhle kwaye ikhathalelwe.
Umthi Jonga uMgangatho weTayile Igumbi lokuhlambela
Umthi yenye yezona zinto zithandwa kakhulu ngaphakathi nangaphandle kwezicelo. Ikwayenye yezona zinto zithandwa kakhulu kumgangatho waphantsi. Nangona kunjalo, iinkuni azilungelanga zonke iindawo zendlu, ngakumbi ezo zichaphazeleka kukufuma okuphezulu kunye nokufuma. Umthi unotyekelo lwendalo lokubola, unokuchaphazeleka kukungunda kunye nokubola kunye nokuluka xa uhlala uphantsi kobumanzi kunye nokuvezwa kwamanzi.
Itekhnoloji entsha kunye noyilo luphuhlise indlela yokufaka ubuhle bomthi kwizinto ezifanelekileyo zokuhlambela izinto ezinje ngeethayile. Sisonke isiphumo kukuhlala ixesha elide, ukutyibilika kwamanzi okumelana nobuhle obufanayo bomthi wendalo. Ngomthi ofana neethayile, ufumana ubuhle beplanga yendalo ngaphandle kwesidingo solondolozo oluphezulu.
Iithayile zokujonga iinkuni ziza ngezixhobo ezahlukeneyo. Ingaba yiporcelain, i-ceramic okanye nokuba yinjineli kwaye ilaminishwe. Ezona ntlobo zixhaphakileyo ziiporcelain kunye neceramic. Izinto ezenziwe ngomthi we-Porcelain ziyomelela, kulula ukuzicoca kunye nokuzigcina, zihlala ixesha elide kwaye zibhetyebhetye. Okona kubaluleke kakhulu, ikwangumelana namanzi, ayizukubola, ukubola okanye ukonakaliswa ngumngundo kunye nokungcola. Iithayile zokujonga iinkuni zinokuma kwiindawo ezimanzi kwaye zihlala iminyaka.
Imigangatho yehardwood ibisoloko ithandwa kakhulu ngabanini bamakhaya kunye nabayili ngokufanayo, kwaye ukusetyenziswa kweenkuni kujonga iithayile kunika indlela entle yokuhlaziya ukubonakala kwendawo yokuhlambela. Umthi ujonga iithayile zenza igumbi lokuhlambela liziva lihle ngakumbi kwaye limeme. Olu hlobo lwempahla yomgangatho luxhaphake kwi-spa enjengeendawo zokuhlambela.
Iithayile zomgangatho wokujonga iinkuni ziza ngobukhulu obahlukeneyo, iimilo kunye nombala onokukhetha kuwo. Ukurhangqa kwiithayile zesikwere ukuya kwiplanga njengeethayile ezinombala obanzi wee-shades ezifana neyona nto yokwenyani. Iithayile zokujonga iinkuni ziyafumaneka kwimibala yesiko enje ngemephu, itsheri, i-oki, i-walnut, i-wenge, ipayini, i-bamboo kwaye ineentlobo ezikhanyayo ezinombala oqaqambileyo noxinzelelo. Iithayile ezijongwa njengeplanga zikwanikezela ngokuguquguquka njengoko zinokuthelekiswa nayo nayiphi na indlela yoyilo, nokuba yeyesiko, eyangoku okanye yanamhlanje kodwa isebenza ngokuthe ngqo ukuba ufuna ukunika indlu yakho yangasese ikhaya elinjengembonakalo kunye nembonakalo.
Eyona Tile iphambili yeGumbi lokuhlambela Porcelain okanye iCeramic ?
Iithayile zeceramic kunye neethayile ze-porcelain zihlala zitshintshana njengoko zinomahluko omncinci kakhulu xa kufikwa kwinkangeleko. Umahluko ophambili phakathi kwezi zimbini uxhomekeke kulwakhiwo lwezixhobo. Ezi zinto zibangela utshintsho oluncinci kwindlela yabo yeempawu kunye nendlela abenza ngayo emva kofakelo.
Iqhina elifanelekileyo lemitshato 2019
Iiporcelain kunye neetiles zeceramic zombini ziwela phantsi kodidi lweethayile ezaziwa ngokuba ziiceramics, kodwa zombini zinempawu zazo ezihambelanayo ezilungileyo nezingalunganga. Ikwangumbuzo odumileyo kubanini bamakhaya ukuba ngowuphi osebenza ngcono xa kufikwa kwisicelo sokuhlambela.
Ngokubanzi, iithayile ze-porcelain zithathwa njengezona zilungele ukusetyenziswa komgangatho wegumbi lokuhlambela xa kuthelekiswa neetiles zeceramic. Umahluko ophambili kukuba iithayile ze-porcelain azinakungena ngakumbi ekungeneni kwamanzi xa kuthelekiswa neetiles zeceramic.
Apha ngezantsi siqhekeza isizathu ngasinye sokuba kutheni iithayile ze-porcelain zilunge ngakumbi kwiithayile zeceramic kumgangatho wokuhlambela:
Iithayile ze-Porcelain zinokufakwa emanzini okuphantsi xa kuthelekiswa neetiles zeceramic. Amagumbi okuhlambela abonakaliswe kakhulu kukufuma, ukufuma kunye namanzi. Ngaloo nto, ukugqitywa kokuhlambela kufuneka kube nako ukumelana nokumanzi rhoqo kunye nokusetyenziswa kwansuku zonke. Iithayile zeporcelain zinenqanaba lokufunxwa kwamanzi nge-0.5%. Olu nqanaba luxhaswe luvavanyo olwenza ukuba i-tile idubule, iiyure ezingama-5 zibile kunye neeyure ezingama-24 zifika emanzini. Utshintsho kwisisindo esipheleleyo setayile limisela inani lokufunxwa kwamanzi. Ukuba i-tile inobunzima obungaphantsi kwepesenti enye ngaphezulu, ihlelwa ukuba ibe yiporcelain.
Iithayile zeporcelain ziphantse zingangeni manzi. Ke xa kuziwa kufakelo lokuhlambela, baqinisekisa ukukhuselwa okungcono ngokuchasene nokufuma.
Iithayile ze-Porcelain zinobume obungafaniyo. Umzimba o-homogenous uthetha ukuba ukwenziwa kwento efanayo kuyo yonke indawo-ukusuka phezulu, embindini nasezantsi. Ukuba iithayile zeceramic zitshixiwe, umbala owahlukileyo ubonakalisa ngaphantsi kwe-glaze ephezulu, ngelixa iithayile ze-porcelain, umbala uyifomathi eyenza ukuba i-chip ingabonakali kwaye ibonakale. Ukwenziwa komzimba weethayile ze-porcelain kuyenza ilungele ukusetyenziswa kakhulu.
Iithayile zeporcelain zomelele ngakumbi kuneetiles zeceramic. Iithayile ze-Porcelain zinoxinano ngokubhekisele kulwakhiwo, ezenza ukuba zingaphantsi kune-ceramic. Kunzima kakhulu xa kuthelekiswa neceramic, yiyo loo nto ukumelana namanzi kungasayi konakala lula. Isizathu kukuba i-porcelain inomxholo ophezulu we-feldspar kwaye igxothwa ixesha elide kubushushu obuphezulu.
Iithayile zeporcelain zinokusetyenziswa njengendawo yokuhambahamba. Iithayile zeporcelain zithathwa njengenye yezona zinto zinzima zomgangatho ofumanekayo kwimarike. Ngenxa yokuqina kwayo okuphezulu kunye nokuqiniswa kwamandla, iithayile ze-porcelain zinokuthi zixhomekeke kutrafikhi ephezulu. Ngokungafaniyo neetiles zeceramic ezifanelekileyo ngakumbi ukuba zisetyenziswe njengesigqubuthelo sodonga okanye njengokugqiba kwegama. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iithayile ze-porcelain zixinene ngakumbi ukubanika ukuxhathisa ixesha elide ukukrwela.
I-Vinyl flooring yindlela efanelekileyo yokwenza iileyili zamatye kunye neetiles zeceramic. IVinyl inesakhiwo esishinyeneyo kwaye yenziwe ngamanqanaba ahlanganisiweyo. Iqukethe i-PVC okanye i-polyvinyl chloride chips ezenziwe ngamashiti ngoxinzelelo kunye nobushushu. La maphepha ahlala ene-⅛ intshi ubukhulu.
Umgangatho weVinyl uhlala uza ngeendlela ezintathu: iphepha le-vinyl, iiplanga ze-vinyl kunye neethayile ze-vinyl. Iithayile zeVinyl zihlala zisetyenziselwa ukufakela igumbi lokuhlambela. Ngaphantsi kweethayile ze-vinyl, kukho ezinye izinto ezimbini zokuhlela ezizezi iithayile ze-vinyl eziqinileyo kunye neethayile zewayini zodidi. Iithayile zodidi lwevinyl zikumgangatho ophezulu okanye uhlobo lweprimiyamu yeethayile zevinyl. Ngokwesiqhelo i-2 ukuya kwi-5 yeemilimitha ubukhulu, iithayile ze-vinyl zodidi okanye i-LVP zihlala zitshixa kwaye zicofe itekhnoloji eyenza ukufakwa kube lula. Ezinye zeendidi zazo nazo ziyabambelela kwaye zinokuba lula kodwa zisebenzisa imela elula. Ukukhululeka kofakelo olwenziwe ngethayile yomgangatho we-vinyl yenza ukuba ibe yinto efanelekileyo kakhulu yokuzenzela iiprojekthi, ezivumela abaninimzi ukuba bonge kwiindleko zabasebenzi.
Umgangatho we-vinyl we-Luxury uyafumaneka emthini njengoyilo olubonisa ubuhle bendalo obahlukileyo bokhuni bokwenyani. Bongeza into yokufudumala kunye nobunkunkqele kwizithuba ngaphandle kwesidingo sokuchitha imali eninzi kumgangatho wendalo.
Iithayile zeVinyl zikulungele kakhulu ukusetyenziswa kwigumbi lokuhlambela kuba kuthintela amanzi. Ukugcinwa okuphantsi kunye nokukhululeka ukusebenzisa, i-vinyl flooring yi-antimicrobial kuba ayiboli, ikhule i-molds okanye i-mildew xa ibonakaliswe kumswakama ophezulu. Iithayile zeVinyl zikwashushu ngumphathi xa kuthelekiswa nelitye lendalo kwaye zinemvakalelo ekhuselweyo ekulungeleyo ukuhamba nokuba uneenyawo. Ngaphandle kwalonto, i-vinyl tile flooring nayo yomelele kwaye ayophuki ngokulula.
Xa kuziwa kuyilo, i-vinyl flooring ibamba ukubonakala kwelitye lendalo, iileyili zeceramic kunye nezinye izinto zokugqiba kwigumbi lokuhlambela. Ke lukhetho olufanelekileyo ukuba unohlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo kodwa awufuni ukuncama i-aesthetics kunye nokusebenza. Iithayile zomgangatho weVinyl ziphinde zifumaneke kuluhlu olubanzi lwemibala kunye neepateni ezinikezela ngamathuba oyilo olungapheliyo. Iithayile zomgangatho weVinyl zinokusetyenziswa kunye negrout yokulingisa ukubonakala kweetiles zeceramic.
Ixabiso leetayile zomgangatho wevinyl lokuhlambela libiza kakhulu kwaye inexabiso elincinci le- $ 1 ngonyawo wesikwere.
Umgangatho weplastiki wokulaminetha yinto eyenziwe ngumntu eyenziwe ngamanqanaba aliqela ezinto zokwenziwa ezidityanisiweyo kusetyenziswa inkqubo ye-lamination. Isiseko sangaphakathi senziwe ngokudityaniswa kwezinto ze-fiberboard kunye ne-melamine resin. Emva koko inikwa umaleko wokufota oyinika uyilo kwaye emva koko ikhutshwe ngocingo olukhuselayo olucacileyo.Ubume bayo bezinto ezifanayo buyafana nezo zilaminethi zisetyenziselwa ukugubungela iincopho zekhitshi. Umgangatho weplastiki we-laminate flooring ufumaneka kwifom yeplank kwaye ulingise ukubonakala komthi okanye ngamanye amaxesha, ilitye.
Olunye uncedo lomgangatho weplastiki wokulaminetha kukuba ayibangeli tshintsho olukhulu kumgangatho womgangatho ngenxa yobukhulu bawo. Oku kuyenza ukuba ifaneleke kakhulu ekwenzeni utshintsho phakathi kweendawo ezimbini. Nangona ingafumaneki kukhetho olufanayo olungenamda olunikezwa ziithayile zeceramic okanye IVinyl, iithayile zeplastiki ezinemibala zinemibala eyahlukeneyo kunye neepateni ezinokuhambelana nezitayile zokuhlambela ezahlukeneyo.
Olona phawu luphambili lophahla lweplastiki laminate kukuba lunotyekelo lokubhabha okanye ukwandisa xa luxhomekeke kubumanzi obuninzi. Umgangatho olaminethiweyo awumi kakuhle kakhulu emanzini njengoko unokungena ngokulula kumbindi wefiberboard. Abanye abayikukhuthazi ukusetyenziswa kwegumbi lokuhlambela, nangona kunjalo lo mbandela unokulungiswa ngokusetyenziswa kwe-caulking. Izikhewu ecaleni kweendonga, kufutshane neendawo zokuhlambela ezifana nebhafu okanye iindawo ezivaliweyo kufuneka ziphathwe ngokuthintela amanzi ukuba angangeni phakathi.
Ngaphandle koko, i-laminate flooring engenawo amanzi inokuphononongwa. Iilaminates ezingenamanzi zine-thermocore yeplastiki, endaweni yesiseko se-fiberboard,. Iziseko ze-fiberboard zifunxa amanzi ngokulula kwaye zande ukuya kuthi ga kwi-8% ngobukhulu xa unxibelelana nokufuma, kodwa iplastiki iyamelana ngokupheleleyo nayo. Xa ukhetha i-laminate flooring kwindawo yokuhlambela yakho qiniseka ukuba le nto iyaqwalaselwa. Iilaminates ezingenamanzi zihlala zine-8 yeemilimitha ubukhulu.
Iindleko zeethayile zeplastiki zokulaminetha zibiza kakhulu, ziqala malunga ne- $ .49 ngonyawo wesikwere.
I-Linoleum luhlobo lwezinto ezingezizo ezenziweyo ezenziwe ngeoyile ye-linseed, ilitye lekalika, iinkuni zomhlaba, umgubo wekhokho, ii-resins kunye nee-pigment. Ayizizo zonke i-linoleum efanelekileyo yokusetyenziselwa igumbi lokuhlambela, ke ngoko kubaluleke kakhulu ukuba wazi imvelaphi yemathiriyeli ngaphambi kokusetyenziswa.
Umgangatho weLinoleum uyafumaneka kwiindidi ezintathu ezizezi: iithayile ezixhasayo ezixhasayo, imigangatho ye-linoleum edadayo kunye nephepha le-linoleum. Phakathi kwezi, ishidi le-linoleum lolona khetho lufanelekileyo kumagumbi okuhlambela. Ifanelekile kakhulu indawo ezimanzi. Ngokwesiqhelo kuthengiswa kwimiqolo enobude obuziimitha ezilishumi elinambini, iishiti ze-linoleum zangaphantsi zinokunqunyulwa nakweyiphi na ubukhulu ukuze zilingane ngokuthe ngqo kubungakanani bakho bokuhlambela Kwaye ekubeni inokunqunyulwa ngokwesiko, ineepase ezimbalwa ezithetha indawo encinci yokungena kwamanzi. Kolu hlobo lophahla, ukufakelwa kobuchwephesha kuyafuneka ukuqinisekisa ukuba onke amaphepha abekwe ngokufanelekileyo ngendlela engqongqo kwaye onke amanqwanqwa alungelelaniswe ngononophelo kwaye ahambelana.
Imigangatho ye-linoleum edadayo ziithayile okanye iiplanga ezinomqamelo wecork ngaphantsi komhlaba. Nangona zikhululekile phantsi kweenyawo, imigangatho ye-linoleum edadayo ayicetyiswa ukuba isetyenziselwe imigangatho yokuhlambela kuba amanzi anokungena ngaphakathi kwaye abangele ukukhula kwesikhunta kunye nokungunda phantsi komhlaba. Oku kunokubangela ingozi kunye nomonakalo ukuba i-linoleum flooring yakho isetyenziswe ngaphezu kwesinye isixhobo njengoko umgangatho ongaphantsi ungaphantsi ngenxa yokungahambi kakuhle.
Iithayile ezixhasayo ezixhasayo lolunye uhlobo lomgangatho we-linoleum kodwa njengangaphambili, oku akucebisi ukusetyenziswa kwegumbi lokuhlambela. Nangona kulula ukuyifaka, ubukho beepaseji kwakhona buyenza ibe sesichengeni sokungena kwamanzi kunye nomonakalo.
Umgangatho weLinoleum unqabile emanzini, kodwa awuthinteli manzi. Ukufuma okugqithisileyo kunokungena kumphezulu wayo okunokuthi kamva kwandiswe, kusongelwe okanye kugqwethe izinto. Nangona kunjalo, oku kunokuqwalaselwa ngokungangeni manzi. Imigangatho ingafudunyezwa ubushushu ukuqinisekisa ukuba zidityaniswe zangqinelana nokungabinako ukufuma. Enye indlela, eyaziwa ngokuba kukukhanya kweflash, inokusetyenziselwa iphepha le-linoleum apho izinto zifakwe kancinane eludongeni ukwenza imiphetho ejikeleze umphetho ongenakungena emanzini. Iarhente yokutywina ye-acrylic ecacileyo inokusetyenziswa kwakhona phezu komgangatho nje xa i-adhesive isomile. Kwindawo emanzi, qiniseka ukuba kusetyenziswa iidyasi ezininzi ukukhusela imigangatho yakho ye-linoleum kumonakalo wamanzi. Ulondolozo lwamaxesha ngamaxesha kunye nokuthengiswa kwakhona kweenyanga ezi-6 ukuya kwezi-12 nako kuyafuneka.
Kukwacetyiswa nofakelo lobungcali kwimigangatho ye-linoleum. Oku ikakhulu kungenxa yokuba imathiriyeli isesichengeni kakhulu kumonakalo wamanzi. Nawuphina umphezulu apho iithayile zomgangatho we-linoleum kufuneka zifakelwe kufuneka zivavanywe ngononophelo kwaye zilungiswe kuqala. Umphezulu kufuneka wome ngokupheleleyo, ungabikho kulo naluphi na uhlobo lokuvuza kunye nokufuma.Kwakhona kufuneka ucabalele, nkqu kwaye ukhululeke kuwo nawuphi na umonakalo.
Ngaphandle kokuba imigangatho ye-linoleum ifakwe ngokufanelekileyo kwaye igcinwe kakuhle, zibonelela ngezibonelelo ezininzi. Imigangatho yeLinoleum inexesha lokuphila elingama-25 ukuya kuma-40 eminyaka, kwakhona ngaphandle kokuba itywiniwe ngokufanelekileyo kwaye inikwe ulondolozo olufanelekileyo. Iyamelana namabala kwaye kulula ukuyigcina ifuna kuphela ukucoceka okumanzi kokucoca. Ukongeza kuloo nto, imigangatho ye-linoleum ichasene ne-microbial kwaye inqabile kwindalo ukungunda, ukungunda kunye nokukhula kwebhaktheriya.
Umgangatho wekhokho wenziwe ngamakhokho oki endalo. Ngokwesiqhelo ithengiswa ngethayile okanye ngeplanga, i-cork flooring iyafumaneka kuluhlu lwemibala kunye neepateni. Ingaba kwi-glue phantsi kwefom okanye nqakraza kwifom yendawo.
Iithayile zekhokho ngokwendalo ziyamelana nokufuma, kodwa azinamanzi. Ngokwemvelo kuyanyangeka ekukhuleni nasekukhuleni kwaye kulula ukutshintsha endaweni yokonakalisa. Imigangatho yekhokho nayo inobuhlobo kwaye iyavuseleleka kakhulu. Xa kuziwa kuyilo, banesitayile kwaye babolekisa ngokufudumeleyo nangokucocekileyo kwigumbi lokuhlambela. Ilungele zombini izindlu zangasese kunye nezendabuko kwaye ibonelela ngomgangatho othambileyo othe chu ukuhamba, ulawulwa ngobushushu nobungqina obuvakalayo.
Iithayile zekhokho ngokubanzi azikhuthazwa ukuba zisetyenziswe kwigumbi lokuhlambela njengoko lithambe kakhulu kwaye linotyekelo lokugoba xa lihamba liphindaphindeka. Imigangatho ihlala iqhekeka kwaye ukutywina kuvalwe xa kukhonkxiwe phantsi kusetyenziswa yonke imihla. Lo monakalo unokuthi kamva ubangele ukufuma kunye namanzi ukuba angene kwizinto kwaye enze umonakalo ongaphantsi phantsi. Ukufuma kunokubangela nokuba imigangatho yecork ikhule.
Nangona kunjalo, kukho olunye uhlobo lomgangatho wokhokho onokuwuphononongwa ukuze usetyenziswe kumgangatho wokuhlambela. Umgangatho weprayimari wokhuni oluphantsi. Cofa ndawonye imigangatho yokudada yekhabhathi edadayo yimilimitha ezi-3 zeplanga kunye neethayile ezixhaswayo. Umphezulu uphathwa nge-UV ephilileyo yokunyanga i-polyurethane top coat edibanisa ukuba ingangeni manzi. Ukwenza imigangatho yangaphantsi yokuhombisa engenakungena ngokupheleleyo emanzini, ukongezwa kwesithintelo somphunga kunye nokugqunywa komthungo kungongezwa. Umjikelezo womgangatho unokutywinwa nge-silicon ukuvala naziphi na izikhewu. Umaleko wokunxiba owomeleleyo kunye nesitywina esikumgangatho ophezulu ziyafuneka ukuze uqiniseke ukuba indawo yakho yangaphantsi yekhokho yakho ihlala ixesha elide.
Uhlobo lwezinto zokwenza i-cork flooring kufuneka ziphandwe ngononophelo kuqala kwaye ziqinisekiswe ngokwenziwa kwazo ngaphambi kokusetyenziswa. Abanye abavelisi banokuyiphelisa iwaranti yayo wakube efakwe kwiindawo ezinomswakama ophezulu. Kwakhona ukufakelwa komgangatho wekhorki kumagumbi okuhlambela kuyinto enamaqhinga kwaye kufuneka yenziwe yingcali. Imijikelezo ejikeleze indawo yokuhlambela enjengebhafu kunye nekhabhathi yamanzi kunzima ukusebenza kuyo kwaye kuyacetyiswa ukuba wenziwe njengeprojekti ye-DIY ukuba unesakhono kunye namava.
Ixabiso eliphakathi lomgangatho wekhokho yi- $ 2 ngonyawo wesikwere.
Umthi wendalo awusetyenziswa ngokufuthi kwigumbi lokuhlambela kuba nje linokugoba kwaye landise xa libonakalisiwe kubumanzi obugqithisileyo Ngaphandle kwalonto, xa amanzi ethe achithwa emthini, unokuwonakalisa umhlaba ngokulungileyo. Ngokuqhelekileyo, iingubo ezi-2 ze-polyurethane zongezwa ngaphezu kweenkuni eziqinileyo ukuze zikhusele. Nangona kunjalo, iindleko ezongeziweyo kunye nokugcinwa rhoqo okufunekayo kunokuba yinto enokubangela ukuba uninzi lwabanini bamakhaya baphonononge ezinye iindlela zomthi wendalo.
Kuba iinkuni zendalo azicetyiswa ukuba zisetyenziswe njengezinto zokubekisa indawo ezimanzi, iinkuni zobunjineli lolunye uhlobo olulungileyo onokuluhlola. Iinjini zobunjineli zenziwe ngesiseko seplywood esime kakuhle ukufuma.
Olona ncedo luphambili kumgangatho wokhuni olwenziwe ngobunjineli kwigumbi lokuhlambela kwakho kukuba inobuhle bendalo obahlukileyo obunemithi yokwenene. Kukwazinze ngakumbi ekusebenziseni igumbi lokuhlambela xa kuthelekiswa nomgangatho oqinileyo womgangatho okhuni.
Iithayile zeglasi ngamaqhekeza amancinci weethayile aqhele ukuba zii-intshi nge-½ intshi ngobukhulu. Eyona milo ixhaphakileyo yeethayile zeglasi isikwere kodwa ziyafika nakwezinye iifom ezinje ngexande okanye isangqa.Iithayile zeglasi zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo njengophawu lodonga, kodwa olu hlobo lwezixhobo lukwasetyenziselwa ukutyibilika kumachibi okudada, indawo zokuhlambela kunye neendawo zokuhlambela.
Esona sibonelelo siphambili sinikezelwa ziithayile zeglasi enemibala yobuhle bayo obumangalisayo kunye nengxelo eqinileyo enikezela kwiindawo zokuhlambela. Iithayile ze-mosaic zeglasi zizisa imo yokunethezeka kumagumbi okuhlambela njengoko ekhangeleka engenzakali, enesitayile kwaye ephucukileyo. Iyafumaneka kwimibala eyahlukeneyo kwaye igqityiwe enokucwangciswa nakweyiphi na ipateni. Iithayile zemibala yeglasi nazo zikulungele kakhulu ukwenza uyilo lweepateni ezinomdla ezinjengeentyatyambo, iimilo zejiyometri, njl. Iithayile zemibala yeglasi nazo zibukeka zintle xa kukhanyiswa njengoko zibonakalisa kwaye zivelisa umphumo omenyezelayo. Iithayile ze-mosaic zeglasi kuphela kwento yokuthambisa enikezela oku kukhanya kukhethekileyo kunye nokuqaqamba.
Umgangatho weglasi wethayile yomgangatho awunabungozi kwaye awonakalisi ekuvezeni okuphezulu emanzini. Iyamelana namabala, ukungunda, ukungunda kunye nokonzakala kweekhemikhali. Ihlala ixesha elide kakhulu kwaye ayiqhekezi okanye iphule naxa iphantsi kwendlela kunye nokusetyenziswa kwayo. Ngaphandle kwalonto, iithayile zemibala yeglasi zilula ukuzicoca kwaye zinokusulwa zisebenzise ilaphu elifumileyo kunye nesisombululo sesepha kunye neviniga.
Nangona iqinile, iithayile ze-mosaic tiles zihlala zithambile kwaye oku kunokubonisa ngokuhamba kwexesha. Ukuba iqhekeza liyaqhekeka, ukutshintshwa kunye nokulungiswa kungabiza kakhulu.Umphezulu wayo ogudileyo unokuba yingozi yokutyibilika. Ukusetyenziswa kombhoxo wendawo kunokuthintela iingozi kunye neziliphu. Ukukhetha ngokufanelekileyo ukugqitywa kwetayile yakho yeglasi kuya kuqinisekisa ukuba ufumana okwahlukileyo okungatyibiliki.
Xa kuziwa kufakelo, iiglasi zetyhefu yomgangatho weglasi zezona zilungileyo ziyekwe kubungcali. Kunzima ukuyifaka xa kuthelekiswa neetiles zeceramic okanye ze-porcelain. Ubungakanani bayo obuncinci kunye ne-grout efanelekileyo kwaye kubonakala ngathi ifuna ukuba ngowona mceli mngeni mkhulu.
Ixabiso leethayile yethayile yeglasi ikwayenye yezona zinto ziphazamisayo njengoko zibiza kakhulu. Iithayile zemibala yeglasi esezantsi zibiza malunga ne-7 ukuya kwi-8 yeedola ngeenyawo zenyawo. Abo bakuluhlu oluphakathi zii-30 ukuya kwi-40 zeedola ngeenyawo zekwere, ngelixa iindlela zokugqibela eziphezulu kunye nokuphindaphinda iipateni zemibala zinokufikelela ukuya kuthi ga kwiidola ezili-100 ngonyawo wesikwere.
I-Terra cotta tile flooring inegalelo kwisibheno se-rustic kwaye inikezela ukufudumala kuseto lwangasese. Eli lizwe lesiqhelo liphefumlele igumbi lokuhlambela lisebenzisa iithayile zecotta zesikwere ezicwangciswe ngendlela eyodwa. Ukusetyenziswa kweepateni ezingaqhelekanga kongeza umdla kuyilo lwendawo ngelixa utsala ingqalelo kumgangatho. Xa udityaniswe nomthi ofudumeleyo ogqityiweyo, iithayile zecotta zetera zibukeka zifudumele kwaye ziyamema. Olu hlobo lweethayile zomgangatho zilungele iMeditera kunye neerustic eziphefumlelweyo zangasese.
I-Terra cotta luhlobo lwe ceramic olwenziwe ngodongwe olubomvu nolubomvu. Inkqubo yokuveliswa kweethayile zetra cotta kubandakanya ukubumba kunye nokubumba udongwe lube yimilo oyifunayo okanye uyilo kunye nokuluvumela ukuba lome. Udongwe olomileyo luyadutyulwa eziko, lwenze lukhuni kwaye luhlale luqinile. Njengazo zonke iithayile, iithayile zeterracotta zinokunyangwa nge-glazing ukuyenza inganyangeki kumabala kwaye inike ukubukeka okuqaqambileyo. Ngaphandle kwalonto, inokushiywa kugqityiwe kwindalo.
Ukwenziwa kwethayile ye-terra cotta kuyinika umbala obomvu obomvu kunye nomhlaba ombala ithandwa kakhulu kwabaninzi. Iithayile zeterra zecotta ziqulathe iidipozithi ezinkulu zentsimbi kwaye zinegalelo kwimbala yazo eyahlukileyo. Ubuhle obahlukileyo benza ukuba ibe lukhetho oluthandwayo lwezixhobo zomgangatho.
Iithayile zomgangatho we-terra cotta zinezibonelelo ezininzi. I-aesthetics ebonakalayo sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni zixabiswa njengezinto zokuthambisa zangasese. I-Terra cotta inika inkangeleko eyahlukileyo kumagumbi okuhlambela. Iithayile zomgangatho we-terra cotta zithandwa kwiindawo zokuhlambela eziphefumlelweyo. Kwakhona lukhetho olukhulu lweMeditera, i-antique kunye ne-log cabin style yangaphakathi kunye neendawo zokuhlambela. Banika izithuba ilizwe elidala ukuba lizive, liboleke uluvo oluvakalayo okanye ixesha elifanelekileyo kunye nokushushu, ukumema ukuziva kwindawo. Ukuba ufuna ukunika igumbi lakho lokuhlambela umbala ongagqithisiyo kwaye le yenye yeendlela onokuzihlola.
Kukho iindawo ezimbalwa ezisezantsi zokusebenzisa iithayile zecotta zomgangatho wegumbi lokuhlambela. Esona sizathu siphambili sokuba kutheni iithayile zeterracotta zinokuba yingxaki njengezinto zokuthambisa zangaphantsi kukuba zinobushushu kakhulu. Kwimeko yayo yendalo, zonke iiseramikhi zinokufunxa ngokulula ulwelo ngokwenza ukuba kuthambekele ekonakaleni okusisigxina, umbala omnyama, ukungunda, ukubola, ukungunda kunye namabala. I-cotta ye-Terra luhlobo lwe ceramic ke ngoko xa iyekwe inganyangwa ayayeka kwiindawo eziphezulu zokufuma.
Nangona kunjalo, lo mbandela unokuqwalaselwa ukubenza balungele ukusetyenziswa kwiindawo eziphezulu zokufuma. Ukunyanga okwethutyana kusetyenziswa itywina kukhusela iithayile zecotta zetraera kwizinto ezinokubangela ingozi kwaye kunciphise ukubakho kokungena kwamanzi kumbindi wayo. Iarhente yokutywina esemgangathweni yeceramic ibhloko yeetiles kwaye iyinike umaleko okhuselayo. Kodwa eli tywina kufuneka lisetyenziswe rhoqo. Ukutshisa umphezulu lelinye inyathelo lokuthintela elenza iithayile zeterracotta zingabi nazimbobo. Le ndlela ibandakanya ukudubula udongwe ngendlela eyenza ukuba iipore zincinci. Esinye isisombululo esilula kukusebenzisa iiragi okanye oomatshini bokuhlambela ukogquma i-nera indawo zokuhlambela okanye iibhafu zokuthintela ukwakhiwa kwamanzi.
Nangona abanye besenokungayicebisi ukuba ifakwe ngokuthe ngqo kumagumbi okuhlambela, i-terra cotta inokusetyenziswa njenge-accents kwimimandla engqongileyo enje ngehafu yokuhlambela, amagumbi okugaya, amagumbi okutshintsha okanye ukuhamba kumagunjana. Ukuba ukhetha ukuyisebenzisela ibhafu yakho ephambili, qiniseka ukuba ukutywina kufanelekile.
Kukho iindlela ezininzi zeethayile zecotta zetera ezinokusetyenziswa njengemigangatho yokuhlambela eyile: iithayile zetracotta ezisikwe ngomatshini, iithayile zeterracotta ezenziwe ngezandla kunye neethayile zecotta ezenziwe ngombala. Iithayile zomatshini osikiweyo we-terra cotta zenziwe kwimizi-mveliso kwaye zinobume obuchanekileyo kunye nobukhulu obufanayo. Iithayile zeterracotta ezenziwe ngezandla, kwelinye icala, zinokugqitywa okungalunganga kunye nobungakanani obungahambelaniyo kunye nefom. Ukubonakala kububulumko, zombini zinomgangatho ofanayo we-terracotta kodwa iithayile ezenziwe ngesandla zibiza kakhulu kwaye zahlukile.
Iithayile zophahla we-cotta ezimenyezelayo ziyaziwa ngenkangeleko yazo ebengezelayo. Ukuhombisa iithayile kuthetha ukugalela iglasi enyibilikiweyo phezu komphezulu womathiriyeli. Injengokubengezela kunika iithayile zecotta terra umaleko okhuselayo owenza ukuba zingabinakungena ukufuma, ulwelo kunye namabala. Ukuqwayita kukwenza ukuba i-terracotta ilungele ukusetyenziswa kwegumbi lokuhlambela.
Iindleko: Iithayile zomgangatho wethayile yomgangatho zibiza naphi na ukusuka kwi-1 ukuya kwi-6 yeedola ngonyawo wesikwere, ngelixa ezo zikwinqanaba eliphezulu zinokunyuka ziye kwi- $ 15 ngesiqwenga ngasinye.
Umdibaniso wamatye endalo agqibezela ukudala ukwahluka kobume kunye nomtsalane wobugcisa obunomdla wale ndawo yokuhlambela yanamhlanje. Usetyenziso oluninzi lwelitye luguqula indalo kwisithuba kwaye inegalelo kwimozulu efudumeleyo. Umdibaniso onambithekileyo weethayile ze-travertine ezixutywe emgangathweni kunye negranite emnyama emnyama eludongeni yongeza izinto ezichaseneyo eziphula ubumbano lwendawo. Iithayile zemnyama zegranite ezimnyama zisetyenziswa kakuhle kuludonga lwekhabethe lamanzi ngelixa ilitye elinye lisetyenziselwa ukwenza isipili sedonga esilinganayo kunye nesinki yelitye lendalo.
Utata umyeni oziqhelanisa nesonka sangokuhlwa
Ilitye lendalo libandakanya iintlobo ezahlukeneyo zezinto ezinjengeemabhile, ilitye lekalika, isileyiti, itrvertine, isandstone kunye negranite. Uhlobo ngalunye lwamatye amatye endalo aneempawu ezahlukileyo xa kufikwa kubume bezinto, ukubonakala, umbala kunye nezinto ezintle nezingalunganga.
Amatye endalo endlu yangasese ahlala ixesha elide kwaye anokumelana nokuwohloka kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla. Xa kuziwa kubuhle, ilitye lendalo linobuhle obahlukileyo obenza ukuba izithuba ziziva zifudumele ngakumbi kwaye zibanike isibheno se-rustic. Ilitye lendalo lineentsilelo ezinje ngemingxunya, imitya, ukubhabha kunye nokuthambisa okwenza ukuba ikhetheke. Ukongeza koku, iminyaka yamatye endalo ngobuhle. Ubuhle bayo obungapheliyo abuphumi kwisitayile. Ubuhle bendalo obwahlukileyo belitye sisona sizathu siphambili sokuba kutheni ihlala ilinganiswa ngabavelisi beetayile.
Esinye isibonelelo sokuba nelitye lendalo kwigumbi lokuhlambela kukuba linokunyusa ixabiso lokuthengiswa kwakhona kwekhaya lakho. Amatye endalo endlu yangasese ayathandeka ngakumbi kubathengi abanokubakho ekhaya kwaye banikwa ixabiso elingaphezulu kwezinye iintlobo zemathiriyeli yaphantsi.
Owona mqobo uphambili wokusebenzisa ilitye lendalo kumgangatho wegumbi lokuhlambela kukuba yinto yendalo. Bajwayele ukufunxa amanzi kwaye ke ukungena kolwelo kumbindi wayo kunokubangela umonakalo omkhulu. Ukufuma yenye yezona zisongelo zayo ziphambili, kwaye kuba izindlu zangasese zihlala zibhencwa kuwo, umgangatho wamatye wendalo kufuneka ukhuselwe rhoqo. Ngokuphathelele kulo naluphi na uhlobo lwesicelo, ilitye lendalo kufuneka litywinwe ngamaxesha athile ukuze likhuseleke. Ukugcinwa rhoqo kunokuba yinkxalabo enkulu kubanini bamakhaya, kuba ngaphandle kwemizamo eyongeziweyo yokugcina, ukutywina kukwayindleko eyongezelelweyo. Ilitye lendalo elisetyenziswa kwindawo zokuhlambela okanye kwiindawo ezikufutshane nebhafu kufuneka liphathwe ngononophelo olungaphezulu kuba zibonakaliswe kukufuma okuphezulu. Ngaphandle kwalonto, ilitye lendalo linokukrwitshwa ngokulula, ngelixa ezinye zinobukrwada kwaye zinotyekelo lokuqhekeka okanye i-chip.
Ilitye lendalo elinendawo egudileyo ngamanye amaxesha kunokubangela ingozi yokutsibilika. Ilitye lendalo linokukhululeka ukuhamba xa lomile kodwa nje ukuba libe manzi, uzinzo lungangumba. Ke xa ukhetha ilitye lendalo kwigumbi lokuhlambela qiniseka ukuba ujonga ukungalingani kokungqubana kwaye unqande ukusebenzisa ukugqiba njengoko umphezulu ogudileyo utyibilika xa umanzi. Ilitye eliqingqiweyo okanye abo banomthi otyhidiweyo okanye otyholwe ngomthi bafaneleke ngakumbi kwisicelo sokuhlala kumgangatho wokuhlambela. Ilitye lendalo liyabanda nakumphathi kwaye linokufuna inkqubo eyongezelelweyo yokufudumeza umgangatho.
Xa uthenga amatye endalo kwigumbi lokuhlambela, jonga izinto ezibalulekileyo kwaye wazi iimpawu ezimbalwa zento nganye. Ezinye zazo zibandakanya ukulinganiswa kokutsalwa kwelitye, ukungalingani kokungqubana, inqanaba lalo kunye neoksijini. Ukunika nje isishwankathelo esikhawulezileyo, umlinganiso wokufunxa umisela ukuba iithayile zineentunja kangakanani - iitrere zethayile zinelona nqanaba liphezulu lokufunxa kwaye azicetyiswa kwiindawo ezimanzi ngelixa iithayile ezingafakwanga zizinto ezinganyangekiyo ekufunxweni lulwelo. Umlingani wokungqubana ulinganisa indlela emtyibilizi ngayo izinto zokutyibilika - inqanaba lomlinganiso ophezulu, ukumelana okuphezulu kunako. Inqanaba lelitye lendalo limisela umgangatho-webanga loku-1 ngowona mgangatho uphezulu kunye nebanga lesi-3 ngabo baneziphene ezinkulu. Ekugqibeleni, i-oxidation okanye inkqubo eyaziwa ngokuba yi-rusting-ngokubanzi, ukuphakama komxholo wensimbi kukuba, ilitye lixhomekeke ngakumbi kwi-oxidation.
I-Marble yinto efanelekileyo yokugqiba ukunyusa indawo yokuhlambela emhlophe njengoko iphula i-monotony yendawo ngaphandle kokuphambuka kokungathathi hlangothi kunye nokusemthethweni. Lo mhlophe mhle I-marble shower ngombala omdaka ongwevu uqaqambisa umgangatho kunye nodonga lwale ndawo yangasese iphefumlelweyo. Ukusetyenziswa kwemarble emhlophe kuguqula ukuziva okunethezeka okugcwalisa ubuhle bezixhobo zangasese eziphefumlelweyo kunye nezixhobo zesitetimenti. Le ndlu yangasese ikwakhanya ngenxa yemibala ekhanyayo esetyenziswe kwiphalethi.
Imarble luhlobo lwelitye lendalo elenziwa kwilitye lekalika elifudunyezwe kwaye liphantsi koxinzelelo lwe-metamorphism. Ngokuyintloko yenziwe ngamaminerali e-calcite, imarble ikwenziwe ngamanye amaminerali afana nodongwe, i-mica, i-pyrite, i-quartz kunye negraphite.
Ubuhle obucacileyo be imigangatho emarmore sesinye sezibonelelo eziphambili ezinokubonelela. Iqhekeza ngalinye lemarble lahlukile kwaye linomxube okhethekileyo wemibala kunye nemithambo kumphezulu wayo.
IMarble yenye yezona zinto zintle zemigangatho yokuhlambela. Ipateni yayo eyahlukileyo yokuhombisa inika inkangeleko ebutofotofo enika ukuziva okutyebileyo kunye nokuqaqamba. Olu lukhetho olukhulu ukuba ufuna ukongeza ubuchwephesha kunye ne-classic flair kumagumbi akho okuhlambela. Ukongeza koku, umbala okhanyayo wemabhile kunye nomgangatho wawo oguqukayo uyinika ukukhanya okwenza amagumbi okuhlambela abonakale eqaqambile kwaye ekhanya ngakumbi. Oku kuyenza ukuba ifaneleke nakumagumbi amancinci okuhlambela kuba inokudala ukukhohlisa kwendawo.
IMarble iza nemixube emininzi yemibala kunye neepateni ezimangazayo zokuthambisa ezibonelela ngethuba elikhulu loyilo. Ingangena kwizikimu ezininzi zoyilo lokuhlambela kodwa ixhaphake kakhulu kwindawo yokuhlambela yakudala kunye ne-Ultra. Iithayile zemarble zikwimo eguqukayo njengoko zinokunqunyulwa zibe ziimilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu obunika indawo ethe kratya yovavanyo kumgangatho wepateni kunye noyilo.
Enye ipropathi eyahlukileyo enokwenzeka ukuba iithayile zomgangatho wemabhile kukuba zingumqhubi ofanelekileyo wobushushu. Inepropathi yokwambathisa yendalo enokugcina ukufudumala kakuhle. Nje ukuba ubeke unyawo kwimigangatho yethayile emarmore, ufumana imvakalelo efudumeleyo eyenza ukuba ilungele ukusetyenziswa kwegumbi lokuhlambela.
Eminye imiqobo yokusebenzisa imigangatho yokuhlambela emarmore kukuba ithambile kwaye inembobo ngakumbi kunamanye amatye endalo. Imigangatho yemarble ayixhathisi kumabala kwaye ukusabela kweekhemikhali kunokubangela umbala ebusweni. Imigangatho yemarble nayo inokukrwitshwa ngokulula kwaye iyathanda ukutyhoboka kunye neetshiphusi ngenxa yokuthamba kwayo. Amanqaku abuthathaka kwiinkqubo zemigangatho yemarble zinotyekelo lokophuka. Nje ukuba yonakaliswe, ukulungiswa kunokuba nzima kakhulu. Kunzima ukususa kwaye kulula ukubeka enye into ngaphezulu kwayo kunokuyitshintsha.
Njengayo nayiphi na into yelitye lendalo, imarble kufuneka itywinwe ngokufanelekileyo ngaphambi kokuba isetyenziselwe ukuyinika umaleko okhuselayo ekukrwemeni, ekumanzeni amabala kunye nokufuma. Kuyacetyiswa ukuba imigangatho yemarble yokuhlambela ithengiswe kwakhona rhoqo emva kweenyanga ezintandathu ukuya kwezilishumi elinambini ukugcina inkangeleko yayo kunye nokwandisa ubude bayo.
Ngexesha lofakelo, imigca ye-grout phakathi kweethayile zomgangatho wemabhile kufuneka ithathelwe ingqalelo. Imigca ye-Grout kunye ne-seams zezona ndawo zisemngciphekweni wezinto ezomgangatho njengoko zisengozini yokuphuma kwamanzi kunye nokungcola okwakhiweyo. Kuzo zonke iintlobo zeethayile zomgangatho, ubungakanani obukhulu beetayile zakho, imigca embalwa yegrout. Imigca embalwa ye-grout ithetha ukugcinwa okuncinci kuyadingeka ukugcina i-flooring yakho ikhuselwe kumonakalo wamanzi kunye namabala.
Iithayile zeMarble ziza kwiindidi ezahlukeneyo, ubukhulu kunye nemibala. Xa kuziwa kwimibala, imarble ngokubanzi yahlulwa yambini, imarble eqinileyo kunye nemarble enemibala emininzi. Imarble yemibala eqinileyo yenziwe ngomthunzi omnye obalaseleyo njenge-beige, emhlophe okanye ebomvu, ngelixa imarble enemibala eyahlukeneyo inomxube wemibala eyahlukeneyo kunye neethoni zangaphantsi ezinomdla.
Ukugqitywa kweethayile zemabhile ukusuka ku-polished, honed okanye ukuwa. Imarble ebengezelelweyo iwela kwinqanaba eliphezulu kwaye ixabiseke kakhulu ngenxa yokubengezela kwayo nokubonakala kugudile. Iithayile zemarmore ezicociweyo zinokubonakala zinomtsalane kodwa azikulungelanga ukusetyenziswa okumanzi njengoko zimtyibilizi kakhulu. Iithayile ezipholileyo zinotyekelo lokubonisa amanqaku nokukrwela ngokulula, ngakumbi ukuba zinombala omnyama. Umgangatho wemabula opolileyo ukwamtyibilizi kakhulu kwaye ke oko akukhuthazwa ukuba kusetyenziswe igumbi lokuhlambela. Xa usebenzisa i-marble kwiindawo zokuhlambela, khetha izinto ezingapolwanga.
Iithayile zemarble ezihloniphekileyo zinokugqitywa okuthe tyaba kwaye kugudile kodwa ngokungafaniyo nemarble ebengezelelweyo, ayisiyonto egudileyo. Ke ngoku, oku kunokusetyenziselwa usetyenziso olumanzi ngaphandle kokukhathazeka malunga neengozi zokutyibilika. Ekuphela kwento ebabuyisayo abanayo kukuba iithayile zemabhile inombala wayo ujongeka ngathi uphelile kwaye uhlanjiwe.
Iithayile zemabhile ezimanyumnyezi zixhomekeke kwinkqubo ethi ibanike ukubonakala okudakileyo okanye okubandezelekileyo. Iithayile ezikrwitshiweyo okanye ezaphukileyo zibekwe kumatshini, ngasekhohlo ukuba zidilike kangangexesha elithile, zinika iithayile indawo enemigca kunye nokubonakala kwendalo. Iithayile zemabhile ezibhitywayo azilingani kwaye azilingani ngobukhulu kunye nembonakalo. Kuba iithayile zemabhile eziwisiweyo zahluka ngokobukhulu, ukuthelekisa kunokuba nzima kancinci.
Ubungakanani beethayile zemarble ziyahluka, zisenza usetyenziso lube bhetyebhetye kwaye lulungele indawo eyahlukeneyo yangaphakathi okanye yangaphandle. Ubungakanani obuqhelekileyo beethayile zemabhile zii-intshi ezili-12 nge-intshi ezili-12 nge-⅜ intshi ubukhulu. Ezinye iintlobo zii-intshi ezili-16 nge-intshi ezili-16 kunye nee-intshi ezingama-24 ngee-intshi ezingama-24, ubukhulu kuzo ukusuka kuma-7.16 intshi t-intshi. Ezi tile zinokuguqulwa nakweyiphi na imilo ukwenza ufakelo lube lula. Ngaphandle koku, iithayile zemabhile zikwakhona kwifomic mosaic. Iithayile zemabhile kaMosaic zihlala zisikwa zibe ziimilo ezincinci, zenziwe zibe ziipatheni ezahlukeneyo kwaye zibekwe kwimingxunya exhaswa. Oku kufanelekile ukongeza isandi kwigumbi lokuhlambela okanye ukudala udonga olunomdla kunye noyilo lweepateni zomgangatho kunye noyilo.
Iindleko: Ngokubanzi, imigangatho yemarble yenye yezona zinto zibiza kakhulu kwimarike kwaye zinokubiza i- $ 5 ukuya kwi-15 yeedola ngeenyawo zesikwere i-intshi ezili-12 nge-intshi ezili-12. Iithayile zeMarble ezingangeni phantsi kobungakanani obuqhelekileyo obufana ne-mosaic okanye iithayile ezinkulu zibiza ngaphezulu. Ukufakwa kuyabiza njengoko kuthatha umsebenzi omninzi, ixesha kunye nomzamo.
Iithayile zethala lokuhlambela zine-rustic evakalelwa kukuba inegalelo kwimfudumalo kwindawo, kodwa xa igqityiwe kwindawo ehloniphekileyo okanye ecekecekeceke, ayisebenzi kuphela kumagumbi okuhlambela aphefumlelweyo emveli kodwa nakwimeko yanamhlanje ngokunjalo. Le ndlu yokuhlambela yanamhlanje, intle kwaye inodonga oluhle lwetrossine kunye neethayile zomgangatho ezichasene kakuhle nomthi odibeneyo njengophahla olungwevu. Umahluko wethayile esikiweyo, imilo kunye nobungakanani, inika uyilo lomtsalane obonakalayo onomdla ngelixa ukuqhubeka kokugqitywa kweendonga kunye nomgangatho kwenza igumbi lokuhlambela libonakale likhulu.
Umgangatho weTravertine Igumbi lokuhlambela
I-Travertine kunye nelitye lekalika zezinye iindidi ezimbini zamatye endalo anokusetyenziswa njengesixhobo somgangatho esenzelwe izinto zangaphakathi nangaphandle.I-travertine yindlela yelitye lekalika elenziwe ngeedipozithi ezahlukeneyo zentwasahlobo zamaminerali. I-Travertine inombala owahlukileyo womhlaba onokudibana kweethoni ze-beige kunye ne-cream, imibala emdaka, e-tan kunye ne-rust.
Uninzi lwabantu luhlala lucinga ukuba i-travertine luhlobo lweemabhile, kodwa xa zibekwa ecaleni, ezi zinto zimbini zahlukile ngokuchanekileyo omnye komnye. I-travertine inembonakalo emnyama kunye nephethini ejikelezayo egxininiswa ngobumnene nangokufihlakeleyo. Umphezulu wayo unombala wendalo onamafutha kunye nobumdaka. Inemingxunya emininzi emininzi.
I-Travertine inembonakalo ye-rustic. Inika indawo yokuhlambela indawo endala enesidima kunye nesibheno esingapheliyo. Umgangatho we-travertine ukwanegalelo lokungacacisi kunye nokuthothisa ukugxila kwimibala yangaphakathi yezikimu ngenxa yeetoni zayo ezinobumnene. Olunye uphawu olwahlukileyo oluchaphazeleka ngumgangatho wangaphantsi kukuba luguge kamnandi kwaye lujika lube ngumbala ocacileyo ngokuhamba kwexesha.
I-Travertine iveliswa ngokuqhelekileyo kwifom ye-tile kwaye ifanelekile ngokufanelekileyo kwi-rustic ephefumlelweyo, yembali, yendabuko okanye yokuhlambela i-antique kunye nezinye iindawo. Ikwayinto yokugqiba eqhelekileyo kumakhaya esitayile seTuscan. Izinto zokwenza imigangatho zigxininisa kubume kunombala kwaye zinokusetyenziselwa ukongeza ubunzulu kwinkangeleko ngokubanzi yezindlu zangasese.
Umgangatho we-travertine wokuhlambela unokuma ngaphandle kwemihla ngemihla, awufakwa ngokulula kwaye imikrwelo okanye iintanda azibonakali kumphezulu wazo. Olunye uncedo olunokubakho kumgangatho wokuhlambela kwindawo yokuhlambela kukuphinda kube nakho ukusebenza kwakhona kunye nozinzo. Ukuba unokuthatha isigqibo sokutshintsha i-flooring yakho, ungawasindisa amakhonkco akho amadala e-travertine ukuze uwasebenzise ngokutsha. Iithayile zeTravertines zikwimo yokubola kwaye ziyawohloka ngokwendalo xa zilahliwe. Iithayile zomgangatho wetravertine zinokususwa ngokulula kwaye zibuyiselwe endaweni, ngokungafaniyo neethayile zemabhile ekunzima ukuziphatha.
Ukongeza kuloo nto, ii-travertine ties zinemiphetho efanelekileyo eyenza ukuthelekisa kunye namalungu kube lula ukuwadibanisa. Kuba isiphelo sigqibelele ngokugqibeleleyo kwii-angles ezingama-90, akukho mfuneko yezikhewu phakathi kweethayile, yiyo loo nto i-grout ingafuneki. Izimvo zeshawa yokuhambahamba Apha.
Kusekho inani lezinto ezingeloncedo ekuhambiseni umgangatho wokuhamba. Njengalo naliphi na elinye ilitye lendalo, i-travertine iyindalo ngokwendalo. Ukujonga ngokusondeleyo umphezulu wayo, ungabona iipoyinti ezincinci ezinokufunxa naluphi na ulwelo oluchithekileyo ngaphezulu. Ngokuphathelele kulo naluphi na uhlobo lomgangatho, oku kunokuthintelwa ngokusebenzisa iarhente yokutywina esebenzayo ethintela ukufuma ekungeneni emzimbeni wayo. Oku kuqhele ukwenziwa ngamanyathelo amabini kubandakanya ukusetyenziswa kwesitywina sokungena kunye nesithinteli somphezulu wokutywina. Ngokwesiqhelo ifakwa ngexesha lofakelo, olu nyango lwenziwa amaxesha ngamaxesha ukuqinisekisa ukuba ilitye likhuselwe ngokwaneleyo kwaye ligcina ukugqitywa kwalo koqobo.
Le mingxunya mincinci inokubangela ukuba ilitye liqhekeke ngokuhamba kwexesha ngakumbi xa lizaliswe ngumgquba okanye isepha. Kwaye xa sele zivaliwe, kunzima ukucoca. Ke qiniseka ukuba oku kuyaphendulwa ngaphambi kofakelo ngokusebenzisa i-epoxy resin njengesixhobo sokugcwalisa imingxunya.
Umgangatho wethayile we-travertine wendalo nawo awugcini ubushushu kakuhle kwaye unokubanda xa uchukumisa. Oku kunokuba kubi kubantu abathile ngakumbi ngexesha lasebusika. Ukuba ingasetyenziselwa imigangatho yokuhlambela, inkqubo yokufudumeza ingasetyenziselwa ukunciphisa ukubanda kwayo. Iirugs zinokusebenza njengokulungisa ngokukhawuleza ukulungisa le ngxaki.
Xa kuziwa kwinkqubo yokufaka i-travertine tile flooring, iyasebenza nzima kwaye ichitha ixesha. Iithayile zeTravertine zinzima kakhulu kwaye zihlala zifuna uncedo lobuchule ngexesha lokuphatha kunye nofakelo. Ubunzima bayo bunokuba ngumcimbi ngakumbi ukuba iprojekthi ibekwe kwisakhiwo esinemigangatho ephezulu.
Iithayile zeTravertine zinokusetyenziselwa igumbi lokuhlambela kunye neeshawari, nangona kunjalo kunokuba nzima ukuzigcina kwaye zinobunzima. Nangona inokusetyenziselwa indawo emanzi, ukuyisebenzisa kwiindawo ezomileyo kunokuqinisekisa ilitye elijongeka ngcono. Ke qiniseka ukuba lonke unyango luyimfuneko ngaphambi kofakelo. Xa usebenzisa i-travertine flooring kwindawo yakho yokuhlambela, khetha iithayile zokugqiba zendalo njengoko zinqabile kumonakalo xa kuthelekiswa nezinto ezihonjisiweyo kunye nezihlonitshwayo. Ukongeza koku, iithayile ezikhazimlisiweyo zibonisa ingozi yokutyibilika ngenxa yokuqaqamba, umphezulu ogudileyo.
Iindleko: Iithayile zomgangatho weTravertine zihlelwa njengezinto zokugqibela zokugqibela, nangona kunjalo xa kuthelekiswa nolunye uhlobo lwamatye endalo, iwela kwinqanaba eliphakathi, ibiza malunga ne-2.50 ukuya kwi-5 yeedola kwisikwere sonyawo.
Umgangatho welitye yinto efanelekileyo kwizinto zakudala zokucoca igumbi lokuhlambela njengoko zinegalelo ekungaphelelweni lixesha, ubucukubhede kunye nokunethezeka kwindawo. Inkangeleko entle yeli gumbi lokuhlambela iqulathe imigangatho yelitye lekalika enqunqwe ubungakanani obahlukeneyo kwaye icwangciswe ngokomzekelo ofana nomzekelo. Ukujonga ngokusondeleyo, isiqwenga ngasinye seethayile zomgangatho we-travertine zinenkangeleko eyahlukileyo kunye nombala ohlukileyo owazo, owenza ukuba imigangatho ibonakale ngakumbi kwaye yongeze indawo kwisithuba. Inkangeleko yeklasikhi igqityiwe nge-antique emhlophe efakwe kwiikhabhathi ezimnyama zelinen yokuntywila, izinto zentsimbi ezibhrashiweyo zentsimbi, ubunjwe obenziwe ngobuchule bokuhombisa kunye nephalethi enombala wekrimu.
I-limestone luhlobo lwelitye lendalo elenziwe ngecalcium carbonate. Umxholo wamaminerali ophezulu we-limestone unika ukuzinza okunamandla. Ngaphandle kokuba itywiniwe ngokufanelekileyo, iithayile zelitye lekalika zikulungele ukusetyenziswa kwigumbi lokuhlambela kwaye ziya kuhlala iminyaka.
I-limestone inesiseko se-beige esingathathi hlangothi kunye ne-undertones yegrey epholileyo, yeendlovu, emhlophe nefudumeleyo. Lo mbala ongathathi hlangothi wenza ukuba kube lula ukuhambelana nayo nayiphi na inkqubo yangaphakathi kunye nesitayile yoyilo lokuhlambela. Yongeza isibheno se-rustic, ilizwe elidala liziva kwaye linika i-spa njengomlinganiswa kwindawo yokuhlambela. Le nto yokuhombisa yangasese yinto yakudala, engaphantsi kokukhetha kwigumbi lokuhlambela.
Iithayile zelitye lekalika zithambile xa zithelekiswa namanye amatye endalo. Banotyekelo lokufumana i-chip, ukuqhekeka okanye ukonakala ukuba kusetyenziswa kakubi. Kwaye ngalo naluphi na uhlobo lwelitye, amandla alo anokuqiniswa ngokusetyenziswa kwesitywina somgangatho.
Kuza kugqitywa kathathu ezahlukeneyo: ipolishiwe, ihonjisiwe kwaye ibrashiwe. Ubungakanani beethayile eliqhelekileyo lelitye le-12 ″ x 12 ″, 16 ″ x 16 ″ kunye no-18 ″ x 18 ″, nangona liza ngobukhulu beethayile ezinobungakanani obuqhele ukusetyenziswa njengesicatshulwa somgangatho wokuhlambela kunye neendonga.
Iindleko: Iithayile zomgangatho weLimestone zitshiphu kunegranite kunye nemarble, zibiza malunga ne- $ 3 ukuya kwi-10 yeedola ngonyawo wesikwere, kuxhomekeke kubungakanani, umbala kunye nokugqiba.
Le ndlu yangasese yangoku isebenzise isileyiti somgangatho wethayile kunye neethayile ze-porcelain ezipholileyo ezindongeni. Umbala opholileyo ongwevu weethayile zangasese zinegalelo kokungafani nxamnye nebhafu entle yokuhlamba. Izibane ezimnyama ezibekekileyo zibekwe ngokuthe ngqo ngaphezulu kwebhafu, zisebenza njengezihombiso ezinesitayile ngelixa zibonelela ngokukhanya okukuyo kwindawo. Kukwaphawuleka ukuba ukukhanya kunika njani iithayile ezikhazimlisiweyo kunye nefuthe eliqaqambileyo.
Isilayiti lolunye uhlobo lwelitye elenziwe ngomxube wezimbiwa kunye neetyuwa ezenziwa ngaphezulu kwexesha elide ngobushushu noxinzelelo. Ukubunjwa kwesilayidi kubandakanya i-calcite, i-quartz, i-mica, i-muscovite, i-pyrite, i-chlorite, i-hematite, i-feldspar, i-ceramic kunye nezinye izimbiwa. Isilayiti lilitye elinye nelinye, nelicolekileyo, nelilitye eliqaqambileyo elinemibala eyahlukeneyo. Ikrolwe kwi-slabs, yaqhekezwa ecaleni kwendalo yayo kwaye ithengiswa ngefayile ukuze isetyenziswe njengomgangatho, ukugqitywa kodonga, ukubuyela umva, izinto zophahla okanye iipavile.
Isilayidi sinombala owahluke ngokukodwa ophethe umbala omnyama ombala ubomvu, omnyama luhlaza okwesibhakabhaka, ongwevu onezandi eziphantsi ezibomvu, zimfusa kunye negolide.
Iithayile zesilayidi zahlulwe zaziindidi ezimbini ngokubanzi: iithayile zewiniweji kunye neetayile ezilinganisiweyo. Iithayile ze-Ungauged sisilayiti kwimeko yaso yendalo enendawo erhabaxa, engalinganiyo kwaye engalinganiyo ngobukhulu. Omabini amacala etayile yesilayidi esingaxutywanga angasetyenziselwa ukutyibilika kodwa ukufakwa kunzima. Ukuncamathela kufuneka kufakwe ngokukhululekileyo kwiithayile ukuze kuqinisekiswe ukuba zibekwe zathi tyaba. Iithayile ze-Ungauged zihlala zisetyenziselwa usetyenziso lwangaphandle.
Iithayile eziguqulweyo, kwelinye icala, zinendawo engaphezulu kunye nobukhulu obufanayo nobukhulu obuqhelekileyo be-1/6 intshi. Ngokungafaniyo neethayile ezingavulekanga, iithayile zesileyiti zokulinganisa zinendawo ethe tyaba ngasemva eyenza ukufakwa kube lula. Ngokuqhelekileyo zibiza kakhulu ngenxa yenkangeleko yazo entle.
Ngaphandle kwezi, iithayile zesileyiti zinokucocwa, ukuhonjiswa, ukuqiniswa okanye ukwenza ngobuqhetseba. Isilayidi esicocekileyo sisileyiti esishiyekwe sikwimeko yendalo- erhabaxa kwaye engalinganiyo. Inkangeleko yendalo yesilayidi esicandekileyo inegalelo kwi-rustic vibe kwiindawo. Akuonwabisi ukuhamba, kodwa kuthintela iingozi zokutyibilika. Iithayile ezenziweyo yinguqulelo ecokiswe ngakumbi yesilayidi esicandekileyo. Inqunyiwe yenziwa ngethayile kodwa igcina ukubonakala kwayo okungqwabalala kwaye okurhabaxa kodwa inemiphetho ebhetele. Isilayiti esenziwe ngobuqhetseba sinokungqubana okukhulu kodwa akonwabanga ukuhamba kuso.
Isilayidi sokuhombisa sinendawo egudileyo, egudileyo. Iyacwebezela, icabalele kwaye ilungele ukusetyenziswa kwezitayile zangoku. Esona sithintelo kuphela kwisilayidi esihonjisiweyo kukuba ibonisa iitshiphusi, iintanda kunye nobumdaka ngakumbi xa kuthelekiswa nesilayidi esicandekileyo. Yiloo nto iithayile zesilayidi ezihonjisiweyo nezihonjisiweyo zifuna ulondolozo olongezelelekileyo. Okokugqibela, isileyiti esikhazimlisiweyo sibhekisa kolona hlobo lwesileyiti licokisekileyo elinombala omenyezelayo nobengezelayo. Isilayidi esikhazimlisiweyo asiqhelekanga kuba olu hlobo lwamatye endalo alufanelanga ukujongwa kakuhle. Phakathi kwezine, olona hlobo lucetyiswayo lwesilayidi sokuhlambela imigangatho yokugqiba.
Olona ncedo luphambili lweethayile zangaphantsi zethayile bubuhle bendalo abanazo. Iithayile zeSlate ziba bhetyebhetye kwaye ziyaguquguquka xa kuziwa kwisicelo kwaye zinokuhambelana nenani lezitayile zoyilo, nokuba zezesiko, zangoku okanye zangoku. Kuxhomekeke ekugqityweni kwayo, iithayile zesileyiti zinokuziqhelanisa nazo zombini iziphelo zembonakalo yoyilo njengoko inokubonakala irustic xa ishiye kugqityiwe kwendalo, okanye ngokutyebileyo okwangoku xa ihonjisiwe okanye ipolishiwe. Inkangeleko yayo eyahlukileyo ebonakaliswa yindibaniselwano eyahlukileyo yemibala kunye neepateni zestriation zinceda ukufaka igxina elomeleleyo kwisithuba. Inesakhono sokudibanisa kwaye inike ingxelo eyomeleleyo ngaxeshanye.
Ukuba bhetyebhetye ngokwemiqathango yesicelo kukwayenye inzuzo. Iithayile zesileyiti zokusetyenziswa aziphelelanga kwigumbi lokuhlambela kuphela kodwa endaweni yoko zinokusetyenziselwa nayiphi na indawo yendlu, ngaphakathi nangaphandle. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iithayile zesileyiti zinokusetyenziselwa zombini imigangatho kunye nodonga.
Iithayile zesileyiti zingasetyenziselwa indawo zokuhlamba. Iyamelana namanzi kwaye ayinamachaphaza amdaka, ukuba iyagcinwa kwaye itywinwe kakuhle.Ayilungelanga ukubumba nokubumba. Iyaxhathisa kwintsholongwane kwaye ukucoca nako ayisiyongxaki. Ukuhlala ixesha elide yenye yezona zinto ziphambili kuzo. Ingasetyenziswa nakwiindawo eziphakamileyo zezithuthi okanye kumagumbi asendlwini asetyenziswa rhoqo, njengendawo yokuhlambela njengoko inako ukumelana nokuxhatshazwa mihla le.
Eminye imingcipheko yokusebenzisa i-slate tile phantsi kukuba ubunzima bayo ngamanye amaxesha bungakhululeki ukuma ixesha elide ukuba unyawo olungenanto. Iithayile zesilayiti nazo ziyaqhekeka kwaye zinotyekelo lokuqhekeka ukuba kukho into eyehlisiweyo kuyo, ke qiniseka ukuthatha amanyathelo okhuseleko afanelekileyo. Okokugqibela, njengamatye endalo, iithayile zesileyiti ziyabanda ukuya ngaphandle kwebala, kwaye abanye abantu banokukufumanisa oku kungonwabisi, kodwa kunokulungiswa ngokusetyenziswa kombhoxo kwindawo ezinesicwangciso okanye inkqubo yokufudumeza umgangatho eyongezelelweyo.
Ngokuphathelele kulo naluphi na uhlobo lwelitye lendalo, isileyiti sikwafuna ukutywinwa ngexesha lofakelo. Ayimelani namabala kwaye iyangena kulwelo. Ngaphandle kwefom ye-arhente yokutywina, ukuqinisa uphawu lokutywina kunokusetyenziselwa ukuphucula umbala wendalo wesilayidi. Oku kuya kukhokelela kwimibala enzulu, eqaqambileyo.
Ngexesha leenyanga ezintathu zokuqala zofakelo, i-slate tile flooring iyathandeka. Ukuqhekeka yinkqubo yendalo kuba isileyiti sijijile kwaye sinqabile ngokwemvelo. Oku kufuna nje ukutshayela ukuthintela uthuli ekwakheni. Kodwa nje ukuba le nkqubo ihlale, iithayile zesileyiti ziya kufuna ulondolozo oluncinci.
Iindleko: I-slate flooring iindleko ngaphezu kweetera zetera kodwa zincinci kakhulu kuzo zonke iinketho zamatye zendalo. Iindleko zethayile zesileyiti zisukela kwi- $ 5 ukuya kwi-20 ngonyawo wesikwere, kuxhomekeke kudidi nasekugqibeni.
I-Granite, ngokubanzi, yenye yezona zinto zithandwa kakhulu ezisetyenziselwa ukuphakama kunye ne-flooring. Lelinye lamatye endalo ahlala ixesha elide afumaneka kwimarike. I-Granite inesakhiwo se-crystalline kwaye yenziwe ngamaminerali afana ne-quartz, feldspar kunye ne-mica. Yenziwe phantsi kobushushu obuphezulu kakhulu, inika ubunzima kunye nobunzima. Xa kufikwa kumba wamandla, inyengane iyahambelana ne-porcelain.
I-Granite ikhutshwe emhlabeni kwiibhloko ezinkulu zaza zahlulwa zibe ngamatye kwaye zilungiswa ukubonisa ubuhle bazo obukhethekileyo. Ngaphandle kwamatye, igranite ikwathengiswa kwifom yethayile, evumela amathuba amaninzi kwizicelo zangaphakathi nangaphandle. Yinto yokugqiba enokuthenjwa enokusetyenziselwa nayiphi na indawo endlwini, kubandakanya namagumbi okuhlambela.
I-Aesthetics yenye yezona mpawu zixabisekileyo zegranite. Ukubunjwa okungafaniyo kwegranite kunika isibheno esibonakalayo esinemibala, imivimbo, imithanjeni kunye neempuphu. I-slab nganye inembonakalo eyahlukileyo kwaye iza noluhlu olubanzi lwemibala, isenza ukuba amathuba okuyilwa angapheli. Imigangatho yeGranite inegalelo kumdla obonwayo kwisithuba, isenza ukuba sibonakale sihle ngakumbi kwaye siphucukile. Isebenza kuninzi lwezitayile zoyilo kwaye zizinto ezifanelekileyo onokuzisebenzisa ukuba ufuna ukwenza ingxelo kumgangatho wakho wokuhlambela.
Eyona nto iphambili kwigranite kukuhlala kwayo ixesha elide. Ubulukhuni bayo bunika umgangatho wendalo onganyangekiyo kunye nomgangatho onganyangekiyo. Imigangatho yeGranite ayonakalisi ngokulula emanzini okanye kwisepha. Ukulungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla, iithayile zegranite zinokusebenzela zombini iindawo ezisezantsi nezisindayo kwaye zinokumelana nokuwohloka. Ihlala ixesha elide kwaye ithembeke kakhulu njengesixhobo somgangatho. Ngaphezulu, igumbi lokuhlambela elinemigangatho yegranite linokunyusa kakhulu ixabiso lekhaya lakho ngenxa yomgangatho weprimiyamu.
Iithayile zeGranite zinzima, yiyo loo nto kungacetyiswa ukuba uzenzele iiprojekthi kunye nokuzifaka ngokwakho. Kuba ubunzima ngumcimbi, ukuphatha imathiriyeli kufuna uncedo olongezelelekileyo. Ukuqesha ingcali ukufakela i-granite flooring yakho kuya kuqinisekisa ukuba umgangatho wegranite kunye nendawo yokuhlambela iya kuhlala ixesha elide kwaye iya kuba nomtsalane obonakalayo.
Ulondolozo lomgangatho wethayile lenyengane lixesha elininzi. Ifuna ukutywinwa ngamaxesha athile ukuyinika ukhuseleko olongezelelekileyo kwizinto ezinokubangela ingozi. Ukutywina iithayile zemigangatho yegranite rhoqo kuya kunceda igranite igcine ukukhanya kwayo kwaye iya kunceda ukomeleza ukuzinza kwayo, ukuyenza ihlale ixesha elide. Iithayile zomgangatho weGranite zinokunyangwa ngesambatho esongeziweyo searhente yesiliphu esikhuselayo esikhusela ekuweni okanye kwiingozi zokutyibilika.
Irabha tile ukutyibilika ifumaneka kwiindidi ezine eziphambili zokugqitywa, eziphothiweyo, ezibekekileyo, ezivuthayo okanye ezitshisiweyo. Igranite ebengezelisiweyo inebenye ecwebezelayo, ecwebezelayo kwaye ihlala icetyiswa kwiindawo ezisezantsi zezithuthi. I-granite ehloniphekileyo ayinayo i-sheen, i-matte kwaye ilungele ukusetyenziswa kwiindawo eziphezulu zezithuthi. Igranite evuthayo okanye ekrashiweyo inendawo ethe tyaba kwaye isetyenziselwa isicelo sangaphandle. Phakathi kweentlobo ezine, olona hlobo lucetyiswayo lwegranite kumgangatho wokuhlambela yigreyite okanye ukugqiba. I-Granite inokuba ngumtyibilizi wokuhamba kwaye inomdla wokwenza amabala ukuba ayinyamekelwanga kakuhle. Ukukhetha uhlobo oluchanekileyo lokugqiba kuya kuqinisekisa ukuba umgangatho wakho wokuhlambela wegranite unokuhlala iminyaka.
Ixabiso: I-Granite ithathwa njengeyoqoqosho kakhulu. I-avareji yeendleko zegranite yi- $ 7 ukuya kwi-15 yeedola ngonyawo wesikwere, kuxhomekeke kubungakanani, umbala kunye nomgangatho. Iithayile zegranite zepremiyamu zinokuxabisa kangange- $ 10 ukuya kwi- $ 40 ngenyawo lesikwere ngenxa yemibala yazo ekhethekileyo kunye nokugqitywa. Ukufakwa kobuchwephesha kumgangatho wethayile wegranite unokusebenza ukusuka kwi-6 ukuya kwi-22 yeedola ngeenyawo kubandakanywa iindleko zomsebenzi kunye nezinto eziphathekayo. Ukugcinwa rhoqo kunye nokutywinwa kwamaxesha ngamaxesha kumgangatho wegumbi lokuhlambela legranite ayibizi kangako njengoko uninzi lwamatywina axabisa i-15-50 yeedola kwisitya ngasinye.
Iithayile zekhonkrithi zinikezela ngobuhle oburhabaxa kunye noburhabaxa obusebenza kakuhle kwizithuba zokuhlambela zangoku zangoku. Ezi tile zekhonkrithi zinokubonakala ngathi zirhabaxa, kodwa zigudile ekuchukumiseni kwaye umbala wayo ofudumeleyo ungwevu usebenza ngokugqibeleleyo ekwenzeni ingxelo efihlakeleyo yendawo. Iindawo zokuhlambela ezimhlophe nazo ziyabonakala ngokuchasene nemvelaphi ngelixa ukusetyenziswa kweenkuni ezichaseneyo kugqiba isinki esinamanzi esidada kudala umahluko kubume kunye nokufaka umbala kwisithuba. Ukusetyenziswa kokugqitywa kwezinto ezifanayo kumgangatho kunye neendonga kugcina ukujongeka kulungelelaniswe ngakumbi ngelixa unika igumbi lokuhlambela indawo ebanzi.
Ithayile yekhonkrithi yokutyibilika kumgangatho weendleko yindleko efanelekileyo kwaye ihlala ixesha elide kwiithayile zekhonkrithi zenziwe ngomxube weesanti ezihlanganisiweyo, izihlanganisi ezirhabaxa zegrabile, isamente kunye namanzi. Umbala wombala kunye ne powder marble ngamanye amaxesha zongezwa kulo mxube. Imveliso ibandakanya ukugalela kwisinyithi sokubumba kunye noxinzelelo phantsi koxinzelelo lweepawundi ezingama-2000.
Iithayile zekhonkrithi zokuhombisa, ngenye indlela ezaziwa ngokuba ziithayile zesamente, zixhaphakile ngekhulu le-18 kwaye zihlala zisetyenziswa kwindawo yokuhlambela yamaLatin, iMeditera kunye neYurophu. Ezi zikwabizwa ngokuba ziithayile zaseCuba, iithayile zeVictorian, iithayile zemishini okanye iithayile hydraulic. Ngokwesiko, ezi tile zenzelwe ukwenza uyilo olunye ngokudibanisa iziqwenga ezine kunye. Iithayile zihlala zijikeleza iidigri ezingama-90 ukwenza ipateni.
Olunye uhlobo lweethayile ekhonkrithi ziithayile zekhonkrithi ezenziwe kwangaphambili ezihlala zenziwe ngokwesiko kuyilo okanye imilo oyifunayo.
Iithayile zekhonkrithi ziphume ngaphandle kweethayile zeceramic kunye neenkuni xa kufikwa kubomi bobude. Njengazo naziphi na iithayile, iithayile zekhonkrithi zibonelela ngokuchaneka njengoko inokusetyenziselwa zombini iindonga kunye nomgangatho, nokuba kungokusetyenziswa ngaphakathi okanye ngaphandle.
Ukwenza ngokwezifiso yenye yeenzuzo eziphambili zeethayile zekhonkrithi. Ikhonkrithi inokubunjelwa kulo naluphi na uhlobo, ubungakanani kunye nombala. Inokugqitywa ukulinganisa ukubonakala kwezinye izinto. Iithayile zombala oqinileyo ziyafumaneka ukuze zilingane neestestics zale mihla. Iithayile zekhonkrithi zineepateni zokuhombisa ezihle kakhulu. Ukusuka kwimibala eqinileyo efihlakeleyo ukuya kwiipateni ezinesibindi, iithayile zekhonkrithi zinokusetyenziselwa ukuhombisa kwiindlela ezininzi zokuhlambela. Uninzi lwabathengisi alo luthatha iiodolo ezenziwe ngokwezifiso ezikuvumela ukuba wenze uyilo olulungiselela iimfuno zakho kunye nesitayile sakho. Ukongeza koku, iithayile zekhonkrithi zokuhombisa nazo aziphelelwa lixesha.
Iithayile zekhonkrithi zihlala zinobungakanani be-intshi ye-intshi kwaye ziyatyeba kunodonga oluqhelekileyo kunye neethayile zomgangatho. Uluhlu oluphezulu lodwa lwekhonkrithi kunye neethayile zesamente zihlala zi-intshi ezi-intshi ubukhulu, ke oko kunika izinto ukuzinza kunye nokuzinza. Ikwayinto emtyibilizi eyenza ukuba ibe yindawo ekhuselekileyo yokuthambisa yomgangatho kwiindawo ezimanzi ezifana neendawo zokuhlambela kunye neendawo zokuhlambela. Kwakhona kulula ukuyigcina kwaye ifuna umgudu omncinci wokucoca.
Ukufakwa kwikhonkrithi okanye kwisamente kwithayile yegumbi lokuhlambela ilandela indlela efanayo neetiles kunye ne-porcelain tile. Nangona kunjalo, kwiithayile zekhonkrithi, kwiidyasi zokungena ngetywina kuyafuneka endaweni yengubo enye. Oku kufuneka kwenziwe ngaphambi kokuguqa ukuthintela umphezulu wethayile ekufunxeni i-grout.
Iindleko: Ixabiso eliphakathi leethayile zekhonkrithi yi- $ 3 ukuya kwi-5 yeedola ngeenyawo zenyawo.
Le ndlu yokuhlambela yanamhlanje isebenzisa iithayile zamalahle ezingwevu ezihambelana kakuhle nombala ongathathi hlangothi wendawo. Umahluko weethayile ze-porcelain ezinemibala esetyenziselwa udonga. Umdibaniso onomdla weetoni ezishushu zomhlaba ubonakalisiwe ngokusetyenziswa kweethayile zecala le-porcelain ezixubene nodonga lwekhabethe yamanzi.
Ukugcina iipateni ezihambelana ngobuqhetseba kulungelelwaniso loyilo kwaye kunika iliso ekubambeni ubuhle bokubona kwindawo. Isinki yamampunge kunye nokwakhiwa ezishelifini kugqityiwe ngomthi omnyama, ukugcina imeko imema ngakumbi kwaye ifana nekhaya. Bona eminye imifanekiso uyilo lwala maxesha lokuhlambela Apha.
Kukho izinto ezininzi ekufuneka uziqwalasele ekumiseleni ukuba loluphi uhlobo lwethayile olulungele indawo yakho yokuhlambela:
Ukuzinza. Ukuzinza kunye nokusebenza kuya kugqiba ukuba izinto zakho zangaphantsi ziya kuhlala ixesha elingakanani. Njengamagumbi okuhlambela ahlala ephantsi kwemihla ngemihla, athanda ukukrwela, aphule kwaye aguge. Iithayile zomgangatho wegumbi lokuhlambela kufuneka zomelele kwaye kufuneka zikwazi ukumelana nokuwohloka.Xa kuziwa ekuzinzileni, akukho nto ibetha iithayile ze-porcelain. Ngelixa kukhethwa amatye endalo, igranite lolona khetho luqinileyo noluzinzileyo.
Ulondolozo. Amagumbi okuhlambela athambile ekungcoleni, kwisikhova kunye nesepha eyakhayo kwaye kuba ichaphazelekile kukufuma okuphezulu, imigangatho yokuhlambela nayo iyathanda ukugcina iibhaktheriya. Iithayile zomgangatho wegumbi lokuhlambela kufuneka kube lula ukuzicoca kunye nokuzigcina.Phakathi kwazo zonke iithayile zaphantsi zangasese, i-ceramic, i-porcelain kunye ne-vinyl tile yaphantsi ifuna ulondolozo oluncinci.
Amanqanaba ama-4 okufunxa iithayile. Uhlobo oluthile lokulinganisa lusetyenziselwa ukumisela ubungakanani bokufuma okufunwayo zizinto. Ireyithi yokufunxwa kweethayile yahlulwe yangamacandelo amane, oko kukuthi: ii-vitreous, i-vitreous semi, i-vitreous kunye neethayile ezingenakuchukunyiswa. Iithayile ezingenakunyanzeliswa ziithayile zoxinaniso ezisezantsi ezinenqanaba lokufunxwa kwamanzi ngaphezulu kwe-7 yepesenti. Iithayile ezinesemi vitreous zinobuninzi obuphakathi kunye nenqanaba lokufunxwa kwamanzi kwiipesenti ezi-3 ukuya kwezi-7. Iithayile zeVitreous ziithayile zoxinaniso oluphezulu ezinesilinganiselo sokufunxwa kwamanzi esiyi-0.5 ukuya kwiipesenti ezintathu. Iithayile ezingagungqiyo okanye iithayile ezixineneyo kakhulu zezo zinepesenti ye-0.5 okanye ngaphantsi kwenqanaba lokufunxa amanzi.
Iithayile ezingenayo i-vitreous azizukukwazi ukumelana nokufuma okukhulu kuba ziya kuthi ekugqibeleni zonakale ngenxa yokufunxwa kwamanzi okuphezulu. Iithayile ze-Vitreous kunye ezingenakunyanzeliswa zilungele indawo emanzi kunye nokusetyenziswa komgangatho wegumbi lokuhlambela. Umzekelo wezinto eziwela phantsi kolu luhlu yi-porcelain tile. Phakathi kweethayile zelitye lendalo, ezona zinto zinokuvuthuluka kakhulu lilitye lentlabathi. I-limestone, i-slate kunye ne-travertine ine-absorbency ephakathi ngelixa i-granite iphantse ingenawo amanzi. Xa kufikwa kugqitywe iithayile, iithayile ezipholisiweyo zifunxa amanzi amancinci xa kuthelekiswa nendawo ecekethekileyo kunye necacileyo. Ukusuka kwezi, kukhuselekile ukutsho ukuba iithayile ze-porcelain kunye neethayile zegranite zizezona zintle zezinto zokuhlambela malunga nokuchaswa kwamanzi.
Ulungelelwano lokungqubana. Umlingani wokungqubana ulinganisa ukumelana kwesiliphu. Olu nqanaba luthathwe kumandla afunwa yinto ukuhamba ecaleni kwethayile, eyahlulwe ngokobunzima bethayile. Akukho sidingo sokwenza izibalo njengoko uninzi lweethayile sele lubonakalisile. Umlingani ocetyiswayo wenqanaba lokukhuhlana kufuneka ubengaphezulu .50 yeepawundi zonyawo konke ukufakwa kwendawo yokuhlala, kubandakanya imigangatho yokuhlambela.Ukuphakama kokungalingani kokungqubana, kokukhona isiliphu siyamelana.
Ukulinganiswa kwe-PEI okanye i-Porcelain Enamel Institute rating. Umgangatho we-PEI ulinganisa amandla eethayile okumelana nokukrwela, ukukrala kunye nefuthe lokunxiba kunye nokukrazuka kusetyenziso lwemihla ngemihla. Olu nqanaba lusebenza kuphela kwiithayile eziglasiweyo. Oku kubonakaliswe kwiifom zamanani esiRoma, zihlala ecaleni koonobumba be-PEI .. Ukunyuka kwenani, kokukhona iya kuba nkulu inqanaba lokunxiba kunye nokunganyangeki ekuqaleni. Iithayile ezikalwe nge-PEI III okanye ngaphezulu zezo zilungele ukusetyenziswa kwemigangatho yokuhlala. Abo bawela phantsi kwe-PEI I kunye no-II ukulinganiswa akufanelekanga kwizicelo zokubeka umgangatho. Xa ukhetha izinto zethayile kwindawo yakho yokuhlambela, qiniseka ukuba ujonga ukulinganiswa kwe-PEI.
Iintlobo ngeentlobo zeethayile zeceramic zenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zithandwa kakhulu kunye neplar yokuhlambela. Igumbi lokuhlambela langoku lisebenzisa iinkuni ezifana neetiles zeceramic ezixhasa into engelutho eyenziwe ngomthi kunye neesinki zakhe. Umthi ofana nokugqitywa kweethayile zeceramic ufana ncam nocwecwe lweplanga lendalo kodwa unike izibonelelo ezibonakalayo zeseramiki. Ukusetyenziswa okuninzi kokugqitywa kweenkuni kudala ukucoceka, ukufudumala kunye nokumema ukuziva kule ndawo yokuhlambela. Iindonga zendawo yeshawari zikwasebenzisa iithayile zecaramic ezimhlophe ezixande ezenza ukuba indawo ibe nomoya kwaye ibonakale.
Eyona tile ilungileyo kuMgangatho wegumbi lokuhlambela elincinci
Nawuphina umbandela womgangatho okhankanywe apha ngasentla unokusetyenziselwa amagumbi okuhlambela amancinci, nokuba lilitye lendalo, ikhonkrithi, i-porcelain okanye iithayile zeceramic, ivinyl okanye i-epoxy imigangatho. Izinto ezifanelekileyo kunye nokugqitywa kuya kuxhomekeka kakhulu kwisitayile sakho kunye nokukhetha, uyilo ofuna ukulufezekisa, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nezixhobo ezibonakalayo zomsebenzi okanye ukusebenza.
Indawo encinci yokuhlambela iluncedo xa isiza kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho kuba inika ithuba elifanelekileyo lokunyusa izixhobo zakho. Ngenxa yexabiso elincinci leethayile ezifunekayo ukubonelela ngendawo encinci yokuhlambela, ungazama ukuphonononga ezinye iindlela ezinokuwela kwinqanaba eliphezulu lamaxabiso njengeethayile zelitye zendalo ezinje nge-travertine okanye i-marble, i-luxury vinyl flooring kunye ne-laminate engenamanzi.
Uninzi lwabanini bamakhaya lusafumanisa ukuba iithayile zezona zibalaseleyo ekubhetheni xa kufikwa kumgangatho omncinci wokuhlambela. Iyasebenza, ibhajethi inobuhlobo, ayinamanzi, ihlala ixesha elide kwaye inxibe ixesha elide. Indawo encinci yokuhlambela ikwavumela abanini makhaya ukuba bazame isandla sabo kwiithayile. Uninzi lweeprojekthi ze-DIY ezibandakanya ukuseta iithayile kuqala ngeendawo ezincinci zendlu, njengebhodi yokutshiza, igumbi le powder, okanye igumbi lokuhlambela iindwendwe. Ubungakanani obuncinci bubungakanani bokuziqhelanisa nokuphuhlisa izakhono zikabani.
Nangona kungekho mgaqo ngokuthe ngqo okanye izinto onokuzisebenzisa kumgangatho omncinci wokuhlambela, kukho izikhokelo zoyilo ezininzi ezinokuthi zihlolwe ukuphucula ukubonakala kwendawo kunye nokwandisa indawo ebekiweyo. Nazi ezinye iingcebiso zokukhetha eyona tile ilungileyo kwimigangatho yokuhlambela encinci:
Khetha umbala omnyama okhanyayo weendawo zokuhlambela ezincinci. Imibala ekhanyayo inesakhono sokwenza iindawo ezincinci zibonakale zinkulu, nokuba kungenxa yokusebenzisa ipeyinti yeendonga, into ethile esemgangathweni okanye ngokusebenzisa iifenitshala kunye nezinye izinto ezigqityiweyo ezenza umbala wekhaya lakho . Into efanayo iya kumagumbi okuhlambela amancinci, ukukhanya okukhanyayo kwimigangatho kudale ukudala ukungaqondakali kwendawo enkulu ngelixa isenza ukuba indawo ibonakale ikhanya ngakumbi, inomoya ngakumbi kwaye ivulekile. Khetha i-white, beige, i-cream, i-brown brown, i-pastels okanye naziphi na izinto ezinemibala ekhanyayo.
Nika ingqalelo kwimigangatho. Iindawo ezincinci zenza ukuba zonke iinkcukacha zoyilo zibonakale, kwaye kwa into efanayo iya kumgangatho wakho. Iimpawu eziphambili kunye ne-grout zibonakala ngakumbi kwiindawo ezincinci. Ngaphezulu kwemigangatho, kokukhona igumbi lakho lokuhlambela likhangeleka njengebhokisi.
Musa ukukhetha umbala we-grout ohluke kakhulu kwiithayile zakho . Umbala wegrout yakho ikwadlala indima ebalulekileyo kuyilo lomgangatho kwiindawo ezincinci zokuhlambela. I-grout ehluke kakhulu inokunika iithayile zakho ukubonakala kunzima. Umzekelo, ukusebenzisa iithayile ezimhlophe kunye ne-grout emnyama kunokwenza igridi efana nokubonakala komda. Ukuba ufuna ukuba wenze ukukhohlisa kwendawo enkulu, qiniseka ukuba umbala wegrout yakho uhambelana kakhulu nombala weetayile zakho.
Khetha umbala wethayile omnye kwiindonga nasemgangathweni. Ukukhetha umbala wethayile omnye kumgangatho kunye neendonga kudala ukuqhubeka kunye nokutshintsha okuthe tye okukhohlisa iliso ekuboneni indawo enkulu. Ngaphandle koko, unokusebenzisa umbala wethayile kwindawo yakho yokuhlambela engundoqo kunye nendawo yokuhlamba. Ukukhetha izinto ezahlukileyo zaphantsi komhlaba ukuze ucazulule kwaye ususe indawo kwindawo yakho yangasese kunokwenza indawo izive igcwele ngakumbi.
Ithayile indawo enkulu kangangoko kunokwenzeka. Kwakhona, le ndlela yoyilo yenza ukuqhubeka kwisithuba. Endaweni yokuthayipha isahlulo nje segumbi lokuhlambela, njengendawo yokuhlamba okanye isiqingatha sophahla lwethayile, thayile udonga lokuhlambela olunye okanye uye emgangathweni ukuya eluphahleni xa uthayipha. Ngaphandle kokuphucula i-aesthetics yegumbi lakho lokuhlambela elincinci, oku kuyanceda xa kuziwa kulondolozo njengoko iithayile kulula kakhulu ukuzicoca xa kuthelekiswa neendonga ezipeyintiweyo.
Zama i-diagonal tile pattern layout ye-flooring yamagumbi okuhlamba amancinci. Iithayile ezilungiselelwe ngokwe-diagonally zinika umbono wento ekumgangatho omkhulu ngelixa zigcina i-aesthetics yendawo yokuhlambela inomdla ngakumbi kwaye inomdla. Uyilo lomgangatho wedayagonal lukhohlisa amehlo, udlala nge-subconscious kwaye wenza abantu bacinge ukuba indawo inkulu ngokusebenzisa iqhinga elilula lezibalo. Iithayile ezingama-90 zibekwe iithayile okanye ngokuthe tye kwaye zibekwe ngokuthe tye iithayile kulula ukuzibala, kodwa xa zicwangciswe kwipateni yokwahlula, ubuninzi bunzima ukufunyanwa.
Khetha ubungakanani beetayile ezinkulu kumagumbi okuhlambela amancinci. Iithayile ezinkulu zinokwenza ukuba izindlu zokuhlambela ezincinci zibonakale zibanzi kwaye zixinekile, xa kuthelekiswa neethayile ezincinci. Ukongeza koku, enkulu ithayile yakho, yimigca embalwa ye-grout ebonisiweyo. Kuyacetyiswa ukuba isithuba esi-3/16 okanye isithuba sigcinwe phakathi kweethayile ezinkulu, nantoni na enkulu inomdla wokujonga imigangatho yakho.
Qiniseka ukuba kukho ibhalansi efanelekileyo kunye nenani elifanelekileyo phakathi kobungakanani bezinto zakho zokuthambisa kunye nommandla wendawo. Ukuba iithayile zakho zinkulu kakhulu, zinokujongeka zincinci kwaye zinzima kwigumbi lokuhlambela elincinci. Nangona kunjalo, ukuba iithayile ezinkulu azihambelani nolwazelelo lwakho, usenokusebenzisa iithayile ezincinci kwigumbi lokuhlambela elincinci. Qinisekisa ukuba umbala wakho we-grout ufana nombala weetayile zakho ukwenza ukuqhubeka komgangatho wakho.
Ezinye iingcebiso zokwandisa iindawo zokuhlambela usebenzisa iithayile zodonga:
Thatha ithuba lokuphakama. Ngaphandle kokwenza igumbi lokuhlambela elincinci liziva libanzi, unokwenza ukuba libonakale lide. Faka iithayile zemigca emi nkqo okanye uye kwiithayile ezishicilelweyo ezinemigca eyilwe enemigca njengoko zithande ukwenza ubungakanani bokuphakama.
Yiya kwiipateni ezinemigca yeethayile eludongeni. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, imigca ethe nkqo ihlala yenza amagumbi okuhlambela amancinci abonakale emade. Imivumbo ethe tyaba, kwelinye icala, inokuzandisa izithuba. Iithayile ezinemigca zinokusetyenziselwa umva kwigunjana lakho lamanzi
Ukunika izindlu zangasese ezineklasikhi i-twist yanamhlanje, olu seto lwenziwe ngomxube wesikwere esincinci esimnyama esimhlophe esimhlophe esilungiswe kwipateni yebhodi yokujonga edibeneyo. Uyilo oluyingqayizivele lugcina ukubukeka kuhlaziywa ngelixa libonelela ngesithuba esitsala amehlo phantsi. Iithayile zomgangatho wemarble zongeza umnxeba wobunewunewu obwenza ukuba indawo ibe ye-ultra chic kunye nesitayile. Ukuzalisa iphepha lodonga elimnyama nelomhlophe kwipateni yeklasikhi yeklasikhi kunye neewinscot paneling zikwanika iindonga isibheno esinomdla, ngelixa kugcinwa izinto ezifana nebhafu yokuhlambela, isinki yamampunge kunye nesipili esilula kunye nomhlophe kudala ulungelelwaniso ngaphakathi kwisithuba.
Eli gumbi lokuhlambela eliqhelekileyo lala maxesha lidibanisa indibaniselwano yezinto zodidi kunye nokuhonjiswa kwesinyithi kunye nokugqitywa kwesipili. Imigangatho ye-epoxy yenza indawo egudileyo kunye egudileyo ehambelana ngokugqibeleleyo noyilo lobugcisa bendawo ngelixa libonelela ngokuhamba okuhlala ixesha elide kwaye kuhlala ixesha elide. Iithayile zemibala ezenziwe ngomfanekiso zazisetyenziselwa ibhafu yokuhlambela kunye nephepha lodonga elinemibala yentsimbi ebalaselisa iindonga njengoko zisongeza ubuhle be-chic kwisithuba. Zonke ezi zinto zigqityiweyo, ngakumbi imigangatho ye-epoxy ekhazimlayo, ijongeka ngcono phantsi kokukhanya kwendalo okudlula kwiiphaneli eziglasiweyo njengoko zikhanya ngokuqaqamba.
Le ndlu enomtsalane ephefumlelweyo yasetyenziselwa ukusebenzisa iithayile ezijikelezayo. Ukusetyenziswa kwezinto ezinomdla kumgangatho ophelileyo kunqumleza ubumbano lombala omhlophe wombala wesithuba ngelixa utsala umdla wokujonga umgangatho. Iipaneli zomthi webhodi yamaso zisetyenziselwa udonga ukuxhasa ii-aesthetics zakudala zesithuba ngelixa iithayile zemabhile ezintle zigqamisa iindonga zommandla weshawari. Ukuyikhupha yonke into, kwakusetyenziselwa izinto zokuhlambela ezindala ezazisetyenziselwa oku kuthandekayo kunye nokubuyela ekhaya uyilo oluncinci lokuhlambela .
Iimpawu ezifudumeleyo ezifudumeleyo zomthi wendalo sesinye sezizathu zokuba uninzi lwabanini makhaya bawuqwalasele njengezinto zabo abazithandayo zokugqibezela, nangona kunjalo, iinkuni azifanelanga ukusetyenziswa kwiindawo ezimanzi kuba zinotyekelo lokuluka, ukubola okanye ukukhula komngundo phantsi kobumanzi obugqithisileyo. . Ukusetyenziswa kweethayile zeceramic ezifanisa ukubonakala kweenkuni kuvumela abaninimzi ukuba babuthathe ubuhle bayo bendalo ngaphandle kokukhathazeka malunga nokusilela kwayo.
Igumbi lokuhlambela langoku lenze ukhuni olumangalisayo njengeplanga yomgangatho kunye nodonga, enika indawo yokuphumla njengokuziva kwindawo. Xa uxutywe nezinto eziluhlaza ezimhlophe ezimhlophe, iziphumo zijongeka kakuhle kwaye zinemibala enokusebenzela uninzi lweendlela zokuyila. Ndwendwela eli phepha ngaphezulu Izimvo zoyilo lwegumbi lokuhlambela onokuyisebenzisa kwikhaya lakho.
Ithini ibhayibhile ngokuthandana
izithembiso zomtshato zesintu ezingezizo ezenkolo
Ixilongo laqhatha umfazi wakhe
Iivesi zebhayibhile malunga nobudlelwane bendoda nomfazi